Ngaba ukukhawuleza kufuneka kukhunjulwe eHalacha kwinkumbulo yokuBulawa Kwabantu Ngenkohlakalo? (Ikholamu 4) - URabi uMichael Avraham
Ngaba ukukhawuleza kufuneka kukhunjulwe eHalacha kwinkumbulo yokuBulawa Kwabantu Ngenkohlakalo? (Kholam 4)
18 izimvo	/ Tu Elul 18 - 09/2016/XNUMX 18 / 09 / 2016
Unyaka nonyaka umbuzo uvela malunga nokuba kutheni izilumko zingabeki usuku lokuzila ukutya okanye usuku lokukhumbula inkumbulo yokuBulawa Kwabantu Ngenkohlakalo. Ukuba bazila ukutya bekhumbula ukubulawa kukaGedaliya uBhen-Ahikam okanye ukuqhekezwa kweendonga ekungqingweni kweYerusalem, kusenokwenzeka ukuba loo mini ifanele ibekwe njengesikhumbuzo sokuBulawa Kwabantu Ngenkohlakalo, okwakuyinto engaqhelekanga neyintlekele. kuthi kakhulu okungaphezulu kunye nokuchukumisa. Iimpendulo zihlala zijikeleza kumbuzo wegunya le-halakhic kunye namandla. Abanye babambelele kwisibakala sokuba asinalo iziko lifanelekileyo (iSanhedrin) elinokumisela usuku olubophezelayo kuKlal wakwaSirayeli. Abanye bathi oku kubangelwa bubuncinci bethu (ukuncipha kwezizukulwana ezikhunjulwayo). Ezi zizathu zivakala ngathi ziphelile. Ukuba iPurim Frankfurt okanye iCasablanca inokumiselwa, kwaye ukuba i-legumes okanye i-smartphones okanye ithelevishini ingavinjelwa, mhlawumbi kukho igunya kwaye kukho amandla okwaneleyo e-halakhic ukuvelisa imithetho emitsha xa kufuneka.
Abaninzi bayibona njenge-halachic Yvonne, kwaye ndicinga ukuba kukho umlinganiselo ofanelekileyo wobulungisa kuyo. Kukho ngokwenene ukuthandabuza apha kokutsha, hleze iinkcazo zophulwe. Ukwesaba ukuguqulwa okanye iZionism (kwinqanaba elilandelayo baya kuqala ukubhiyozela uSuku lwe-Independence kwaSirayeli). Kodwa ndifuna ukunika imbono ebanzi neyahlukileyo apha, ngalo mbuzo.
Ndaya kuma impiriyali
Into ebalulekileyo kwimfundo yonqulo yethu sonke kukuphelela kwehalakhah. Ifanele ukuquka yonke into, umhlaba wonke uyahlonitshwa kwaye kukho indawo engenanto. Yonke into, kwaye ngokukodwa izinto ezixabisekileyo, kufuneka idlule kwi-reactor yovavanyo lwe-halachic kwaye ibe yeyayo. Elinye icala lengqekembe kukuba akukho xabiso lixabisekileyo okanye izenzo ezingangeni kwi-halakhah kwaye zibe yinxalenye yayo.
Umzekelo, abaninzi bajonge ingxelo yentlalo-qoqosho ye-halakhah. Ngaba i-halakhah yezentlalo yedemokhrasi, i-capitalist (ingcebiso: le yeyona mpendulo ikufutshane) okanye ubukomanisi? I-Morning News ipapasha inqaku elibanga ngomdla indlela i-halakhah ye-socialist eyiyo, ikhuthaza ubulungisa obusasazwayo, ubungxowankulu, ubukomanisi nokunye okunjalo.
Ingcinga eqhelekileyo kuzo zonke ezi zikhundla kukuba i-halakhah ngokuqinisekileyo yinto yazo zonke ezi. Ndingathanda ukukhanyela apha olu ngcinga luqhelekileyo, kwaye ndenze njalo kumanqanaba amabini: a. Andicingi ukuba kunokwenzeka ukukhupha kwi-halakhah inkcazo engathandabuzekiyo kule miba neminye efana nayo. B. Kwakhona akukho mfuneko yokwenza oku. Akukho sizathu sokuba uHalacha abe nengxelo enjalo. Ngoku ndiza kuzama ukucacisa ngakumbi.
A. Ngaba i-halakhah inenkcazo yengcamango ecacileyo?
IHalacha yingqokelela yamazwi amaninzi athe avela kwizizukulwana ngezizukulwana, kwiindawo ezininzi naphantsi kweemeko ezahlukeneyo nangabantu abohlukeneyo. Ayisoloko inokuhambelana kwinqwelomoya ye-meta-halachic. Njengomzekelo obolekiweyo, siza kuthabatha izigqibo zikaMaimonides kumbandela weentshumayelo. Nokuba bacinga ukuba bane-halakhic consistency, mhlawumbi abayigcini i-meta-halakhic consistency. Njengoko kusaziwa, kukho ukungavisisani phakathi kweBeit Midrash kaRabbi Akiva kunye noRabhi uIshmael malunga nendlela ekufuneka iTorah ngayo (yeRish - jikelele kunye neyabucala, kunye neRA - isininzi kunye nencinci. Jonga Shavuot XNUMXa kunye nongqamaniso ). Kukho imiba emininzi ezisa iziphumo ezahlukeneyo ze-halakhic kule mpikiswano ye-meta-halakhic. U-Maimonides ulawula kwi-halakhah kweminye yale miba, kwaye njengoko sele ndibonisile kwenye indawo kuvela ukuba ngamanye amaxesha ulawula njengombono we-halakhic oxhomekeke kwintshumayelo eqhelekileyo kunye neyodwa kwaye ngamanye amaxesha ulawula njengombono oxhomekeke kubuninzi kunye nabancinci. Ayigcini i-meta-halakhic consistency.
Ndicinga ukuba i-halakhah ngokubanzi inokuba ne-halakhic consistency (kwaye nayo le yinkcazo ebaxekile kancinane ngokoluvo lwam), kodwa ayibonakali ine-meta-halakhic okanye i-ideological consistency, okt ivakalisa ngocwangco, ubukomanisi, i-capitalist okanye enye into. Umxholo ophantsi wentlalo noqoqosho. Imithombo eyahlukeneyo isithatha kwizigqibo ezahlukeneyo, ayizizo zonke ezibophelelayo, kungekhona zonke ezisebenza kuzo zonke iimeko, kukho ukutolika okuhlukeneyo kuninzi lwabo, ngoko akunakwenzeka ukukhupha kubo i-mishnah ehlelekile. Ngamanye amaxesha akunakwenzeka nokukhupha isigwebo esicacileyo se-halakhic, kodwa ngokuqinisekileyo akunandaba ne-halakhic meta ehlelekile.
Kubalulekile ukuqonda ukuba ingxaki ayikokuntsonkotha, ubuninzi bemithombo, okanye nabuphi na obunye ubunzima ekwenzeni oko. Ndiyaphikisana ukuba mhlawumbi akukho nto injenge-sub. Nabani na okhupha i-mishnah enjalo kwi-halakhah ngokombono wam uyayikhohlisa, okanye ubuncinci ubandakanyeka kubuchule bokutolika obuphikisanayo. Njengomqondiso, andicingi ukuba ndiyayazi nayiphi na kwabo bajongana nale miba abaye batshintsha ngokusisiseko izikhundla zabo zeengcamango emva kokuphononongwa kwe-halakhah (ngaphandle mhlawumbi kwimeko ethile apho bafumana inkcazo ye-halakhic ecacileyo). Ingxoxo enjalo ayinakuze ihambe njengommiselo emva kokutolwa kotolo. Nabani na ongobusoshiyali uya kufumana kwiTorah isoshiyali yakhe, kwaye kuyafana nakwi-capitalist okanye nawuphi na omnye ongaphantsi kwezentlalo noqoqosho. Oku kuphakamisa ukrokro olunamandla lokunganyaniseki kwengqondo. Abantu bacinga ukuba kufuneka kubekho indawo yentlalo-qoqosho kwithiyori, bafumana isikhundla esinjalo ngaphakathi kwabo, baze baqalise ukusebenzisa ubuchule bokutolika obungaqinisekanga, izicatshulwa ezikhethiweyo ezivela kwimithombo ekhethiweyo kunye nokunye okunjalo, ukufumana into eqinile kule ngqungquthela ye-anarchic.
Ndiza kongeza omnye umbuzo kwimida yamagama am: Masithi ngokwenene ndiphumelele ukukhupha kwi-halakhah ulwahlulo olucwangcisiweyo lwe-ideological-socio-economic, ngaba oko kuya kundibophelela? Inyaniso yokuba eminye imithetho isekela ingcamango ethile yezentlalo noqoqosho ayindinyanzeli ukuba ndiyamkele. Ndingazibophelela kwaye ndisebenzise le mithetho (ukuba ngenene iyabophelela) ngaphandle kokwamkela ingqikelelo esisiseko. Intsingiselo yeyokuba ukuba lo mbono unezigqibo ezongezelelweyo ezingazange zibekwe kwi-halakhah njengezibophelelo - andiziva ndibophelelekile kuzo. Okona kuninzi ndingatsho ukuba nam ndine-meta-halachic inconsistency. Sendibonisile ukuba ndihamba kakuhle kulomcimbi, hayi?
Kum kubonakala ngathi nokuba i-halakhah inomyolelo kwezi ndawo, eyona ngxelo inyanisekileyo endinokuyithetha ngayo kukuba i-halakhah ifuna ukuba sisebenzise ingqiqo kwaye senze ngendlela endilisekileyo nenengqiqo. Ukususela ngoku, wonke umntu uya kuzenzela isigqibo sokuba yintoni enengqiqo kwaye yintoni enengqiqo kwaye aqulunqe imbono yakhe yentlalo-qoqosho. Le mbono yintando yeTorah kunye neHalacha kuyo. Kodwa oku kunjalo kuphela kwinqanaba lokuqala, okoko nje sicinga ukuba ithiyori ngokwenene inomnqweno wethu kwiindawo ezinjalo. Ngoku siza kudlulela kwinqanaba lesibini.
B. Ngaba kufuneka kubekho indawo ecacileyo yeengcamango kwithiyori?
Ngoku kufuneka sizibuze ukuba kutheni na sicinga ukuba kufuneka kubekho indawo yeengcamango kwithiyori kule mibuzo? Andiyiqondi le impiriyali ye-halakhic, kwaye ngokusemandleni am ukuba ayibambi amanzi. Akukho sikhundla sinjalo kwaye akufanele kubekho. Akunjalo nje ngenxa yokuba i-halakhah yenzeka ukuba ingajongani nale mibuzo, okanye ngenxa yokuba kunzima ukukhupha isikhundla kuyo ngenxa yobunzima obahlukeneyo (ibid.), Kodwa mhlawumbi ngenxa yokuba (= iqoqo le-halakhic?!) likwakhethile (mhlawumbi ngokungazi). ) ukungazibandakanyi kuzo kwaye ungathathi isigqibo ngazo. Akababoni njengobuntu bakhe kwaye ke ndibashiya ngaphandle kobukumkani bakhe.
Ndingathanda ukunika apha enye ithisisi kule yamkelweyo. Sonke singabantu, kwaye inxalenye yeqela labantu ngamaYuda. UmYuda ngowokuqala kwaye uphambili ngumntu kwaye ke umYuda, njengoko u-Muharram Tzitzaro Zatzokal wathi: "Akukho nto yomntu ongaqhelekanga kum" (ibid., Ibid.). Ngaxeshanye nolu lwahlulo phakathi kwemigangatho emibini, kunokwenzeka kwakhona ukwahlula ixabiso lehlabathi (yamaYuda!?) kwimigangatho emibini: 1. Umgangatho wendalo yonke, oqulethe ixabiso lehlabathi kwelinye icala kunye nexabiso lomntu enye. 2. Umgangatho okhethekileyo wehalakhic wamaYuda.
Umgangatho wokuqala uqulethe amaxabiso angafuneki ukuba afakwe kwiHalacha. Abanye ngenxa yokuba babophe yonke into ehlabathini kwaye kungekhona nje (ihlabathi lonke) lamaYuda, kwaye abanye ngenxa yokuba ubukho babo kufuneka benziwe ngokuzithandela kunye ngabanye kwaye kungekhona ngendlela efanayo yokubopha kuthi sonke njengoko kufunwa kwindawo ye-halakhic.
Lo mqhulo waziwa ngegama likarabhi wasePonivez owaxhoma iflegi kuphahla lwePonivez yeshiva eBnei Brak rhoqo ngeMini yeNkululeko kwaye akazange acele sicelo, kodwa akazange adumise. Xa uThixo wathi wayeyiZiyon njengoBen-Gurion, uBen-Gurion akazange athethe indumiso okanye abongoze. Abaninzi be-ultra-Orthodox ndivile bahlekisa kakhulu ngeli qhula ngeendleko zeZionist ezizidenge nezibi, kodwa andicingi ukuba baye bangena ekujuleni kwentsingiselo yayo. Injongo yalo rabhi yayikukuthi wayengumZiyon wehlabathi, kanye njengoBen-Gurion. I-Zionism yakhe ayikho inkolo, kodwa ixabiso lesizwe, kwaye ngoko uzinikele kuyo ngaphandle kokungena kwi-halakhah. Usuku lwe-Independence luyiholide yelizwe yelizwe ebhiyozelwa ngurabhi wasePonivez, kwaye wayengenamdla ekuwunikeni umlingiswa wenkolo kunye nokuwuqinisa kwimimiselo ye-halakhic.
Buyela kuSuku lokuKhumbula iHolocaust
Namhlanje, abantu bakwaSirayeli bakhumbula ukuBulawa Kwabantu Ngenkohlakalo ngeendlela ezahlukahlukeneyo, ezinye zazo ezisekelwe kumthetho nakwinkqubo yentlalo yoluntu ngokubanzi yaye ezinye zazo zezomntu ngamnye. Ezi ndlela ezinjengalezi zibonakala zinelisekile ngokupheleleyo, kwaye andifumani mfuneko okanye isizathu sokuziqinisa kwimimiselo ye-halakhic, nangona namhlanje kukho iqumrhu elinobuchule elinokwenza oko. Ngabo kumgangatho wokuqala kwezi zimbini zichazwe ngasentla, yaye akukho sizathu sakuzifudusela kowesibini. Usuku lweSikhumbuzo sokuBulawa Kwabantu Ngenkohlakalo lusuku lwesizwe olungenalo unqulo, yaye akukho nto iphosakeleyo ngaloo nto. Ayilahleki ixabiso layo, kwaye akuyonyaniso ukuba yonke into yexabiso kufuneka ifakwe kwi-halakhic okanye nakwisakhelo senkolo.
Ngendlela efanayo, ngoMhla we-Independence, ngokuqinisekileyo ndithi indumiso njengombulelo nokudumisa kuThixo, kodwa andiyiboni njengosuku lokubaluleka konqulo kwaye ngokuqinisekileyo alukho i-halakhic. Intsingiselo yalo yesizwe, kwaye mna njengeZionist yelizwe (njengoRabi wasePonivez kunye noBen-Gurion) ndijoyina kule siseko kuphela. Anditsho ukuba uHillel kuba uRabhi oyiNtloko uye wawisa umthetho wokuba kuthiwe uHillel, kwaye oku akubangelwa nje kubudlelwane bam owaziwayo neli ziko. Ndithi indumiso kuba ndicinga ukuba kulungile kwaye kulungile ukwenjenjalo. Le yindlela yam njengomntu wenkolo yokuvakalisa isikhundla sam sobuzwe.
Ngoko kwakunjani ngaphambili?
Kwixesha elidlulileyo, ngokwenene baye bamisela onke amaxabiso kunye nalo lonke uxanduva lwexabiso kwi-halakhah. Izilumko kunye nenkundla ngabo babeka imihla yokuzila nokugcoba kunye namaxesha ethu. Kodwa ndicinga ukuba sisiphumo semeko eyenziweyo apho kungekho kumkani kwaSirayeli. Umbhali weentshumayelo zikarabhi uthetha ngeenkqubo ezimbini ezifanayo zolawulo, ukumkani kunye nenkundla. Ngesizathu esithile kwimithombo yeSilumko phantse akukho ncam yenkqubo yokumkani ibonakala. Inkundla yamatyala ilungisa iindlela kwangexesha (sub-MOC), okuthetha ukuba ibiyi-Ofisi yoMphathiswa wezoThutho. Balungisa imimiselo kunye nokuseka iinkqubo, imigaqo yokuvota kuluntu inqunywe yi-halakhah kwaye ibonakala kwi-Shulchan Aruch. Kakade ke, nabo bafuna imvume yomntu obalulekileyo (= umlamli). Kodwa ndicinga ukuba oku kwakusisiphumo senyaniso yokuba iToshbha'ap yasekwa ngexesha apho kwakungekho kumkani kwaSirayeli, kwaye igunya lorhulumente welizwe lisuka kukumkani ukuya kwi-BID enkulu. Ke ngoko abongameli beSanhedrin babengabembewu yendlu kaDavide, ekubeni babesebenza njengookumkani. Ukususela ngoko kude kube namhlanje siye saqhelana nenyaniso yokuba akukho nqanaba lesizwe kwaye yonke into yeyabalamli kunye nenkundla kunye nenkolo yethu kunye ne-halakhic dimension. Endaweni yokuba ukumkani amisele ukuziphatha kwethu ngaphaya kwe-halakhah, i-BD iyabetha kwaye yohlwaya ngokungekho sikweni. Eli gunya le-BID liyimbonakaliso yegunya lokumkani kurhulumente wokuqala.
Njengenxalenye yento enye siye saqhelana nento yokuba yonke into yayiyiTorah kwaye yonke into yahamba. Ukuba abukho ubomi bomntu obuqhelekileyo, kwaye ngokuqinisekileyo akukho xabiso, ngaphandle kwe-halakhah. Ukuba yonke into kufuneka iqhutywe kwaye igqitywe ngabalamli kunye noorabhi. Kodwa namhlanje kukho ithuba lokubuyela kwisiqhelo. Abantu bakwaSirayeli banomlinganiselo wesizwe wehlabathi kwiBH (BH ekungekhona kubuzwe kodwa ekubuyeni komlinganiselo wehlabathi wobomi bethu sonke. Bambi baye babhekisela kuyo njengokubuyela kwethu kwinqanaba lembali). Akukho sizathu sokuqhubeka sibambelele kwifomathi esiyiqhelileyo ngenxa yeepathologies zembali ezahlukeneyo.
Ukuqukumbela, ngokuchaseneyo nee-intuitions ezikhoyo, ukugxothwa akuzange kunciphise kuphela intsimi ye-halakhah (nangona oku kwenzeka kwezinye iinkalo) kodwa kwandise ngaphaya kokufunda okufanelekileyo kwezinye iindawo. Umntu kufuneka abuyele kwisiqhelo kwaye angazikhathazi ngobume be-halakhah ngokubhekisele kwi-impiriyali kuyo kunye nemimandla yayo kwaye ayivumele ibe phantsi kwamaphiko ayo zonke iindawo zobomi bethu. Ukuchaza ngenye indlela abazala bethu abangamaKristu, masingangeni esihogweni: sinike umthetho into onayo, kunye nokumkani (okanye umntu) oko anako.
Kwinkululeko yokuthetha, ukukhanyela ukuBulawa Kwabantu Ngenkohlakalo kwaye "Uze ungajiki" (ikholamu 6)
Umthetho wePropati kwiHalacha kunye noMthetho
Ulwabiwo lweHolocaust kunye neCandelo - ukuya kwi-Adi Ofir (Iincwadi zeHaaretz - 2001)
18 Iingcamango malunga “Ngaba kufuneka kubekho ukuzila eHalacha ukukhumbula ukuBulawa Kwabantu Ngenkohlakalo? (Kholam 4) ”
Ngaba awucingi ukuba nangona i-mishnah enocwangco ingafumaneki kwiHalacha njengoko iye yabunjwa kwizizukulwana, umntu unokufumana enye ubuncinane kuluhlu lweTorah ebhaliweyo? Ndabona kwincwadi yakho ethi Thixo edlala amadayisi ukuba uthi iBhayibhile ayithethi ngemilinganiselo yokuziphatha kodwa ithetha ngemilinganiselo yonqulo. Oko kukuthi, ngokwamazwi akho (ngokokuqonda kwam) bonke ubuYuda, iTorah ebhaliweyo kunye neTorah yomlomo iyinxalenye yomaleko ophuma kubomi obuqhelekileyo bomntu kwaye iwela kudidi "lwenkolo". Kwaye ndiyabuza ukuba yintoni na loo nto "inkolo", ithetha ukuthini? Ngaba yinto nje engafanelekanga ngaphandle kwengqiqo kumntu oyigcinayo? Kwaye nabani na ocinga ukuba kukho inqaku kwi-mitzvos akuthethi ukuba kufuneka babekwe kwinqanaba eliqhelekileyo nelifanelekileyo kumntu / uluntu / uluntu? Kwaye oko, umzekelo, akunakwenzeka ukugqiba kumyalelo wemigaqo yezoqoqosho yeshemita njengoko wenzayo uJabotinsky?
Kubonakala ngathi inyathelo elichazwe apha kufuneka liqhutyelwe inyathelo elinye ukuya phambili. Kum, ukuthinjwa akuzange kudale i impiriyali yonqulo nje kuphela kodwa ngokuqhelekileyo kwadala udidi lwenkolo, umaleko ongekhoyo eBhayibhileni. Imithetho yanikelwa ngenzuzo yesizwe kuqala kwaye iphambili "ukwenza oko phakathi kwelizwe." Ndicinga ukuba uzilo esilubambileyo ngoku kufuneka luphathwe kanye njengoko usitsho ukunyanga uMhla wokuBulawa kwabantu ngenkohlakalo namhlanje, kwinqanaba likazwelonke.
Ndingathanda ireferensi yakho.
Ndicinga ukuba into yokuqala ayifumani. Iinzame ezenziweyo azikholeleki ngokwenene. Kubalulekile ukuba ungayihoyi inyani kwaye uyibeke phantsi kwiminqweno yethu (nokuba ifanelekile kwaye ilungile). Ndicinga ukuba nakwiTorah ebhaliweyo amorphous. Ngokuqinisekileyo amaxabiso ehlabathi wonke umntu avumelana ngawo uya kuwafumana kuyo yonke indawo. Kodwa isifundo seTorah okanye iHalacha ayitshintshi, ngokombono wam, nayiphi na into kwimibono oye wayiqulunqa ngokwakho (kwaye oku kuyinyani ngokombono wam, ukuba abantu bafumana oko bafuna).
Ndiyavuma ukuba kwiZage kwakungekho mahluko phakathi kokuziphatha kunye nenkolo kwaye mhlawumbi nakwiRishonim. Ngandlela ithile ukugxothwa kwadala lo mahluko (kwaye ngokubanzi, imbali ye-halakhah kukudala ulwahlulo olwalungekho ngaphambili. Ukugqibela kwenza iimbono ezingekho kwi-mishnah njalo njalo). Kodwa ngokoluvo lwam luphawu lokuba umhlaba uhambela phambili (kwaye awubuyi umva). Ngoku siyaqonda ukuba kukho iindidi ezimbini zexabiso, apho uninzi lweenkosi zethu ziye zachonga phakathi kwazo. Isalathiso soku (esisinceda ukuba siqonde oko bangazange bakuphawule) kukuba siyabona namhlanje ukuba kunokwenzeka ukuba nesimilo nangaphandle kokuzibophelela elunqulweni. Ngoko kutheni ucinga ukuba ukuzibophelela elunqulweni kwenzelwe iinjongo zonqulo? Ngolu luvo alunamsebenzi namhlanje.
Ngokuphathelele ukutolikwa kweenjongo zonqulo, ucinga ukuba akukho zixabiso ngaphaya kwemilinganiselo yokuziphatha. Le yingcinga apho andiyiboni isiseko, kwaye ngokuqinisekileyo kungekhona xa ujonge iTorah kunye neHalacha. Kwinxalenye enkulu yezinto kubonakala kum ukuba ukulungelelaniswa kokuziphatha akufumaneki. Ngoko kutheni kucingwa ukuba wonke umntu umiselwe ukuziphatha kakuhle? Ngokombono wam kukho kwakhona ukubambelela kwiminqweno yentliziyo kunye nokungakhathaleli izibakala.
1. Kucacile ukuba i-alibi isifundo seBhayibhile, ukuba iBhayibhile i-strata eyahlukileyo emele izikolo ezahlukeneyo kunye neembono zehlabathi, akukho nto inokuthetha ngayo. Kodwa ukuba siyawamkela umlinganiselo wesityhilelo seBhayibhile, eneneni ngokoluvo lwam indawo ethile inokuqulunqwa okanye icocwe ekufundweni kweendinyana. Umzekelo unxulumano lweBhayibhile nobukhosi ngumba endicinga ukuba ngokuqinisekileyo unokuxoxwa ngohlalutyo olunzima lokutolika. Ngokomzekelo, ndicinga ukuba uMaimonides, owabona kwityala likakumkani ileta yokumiselwa kokumkani wakwaSirayeli, wayibetha ngoyaba intsingiselo elula yaso sonke isahluko esilapho. Asinakukwazi ukukholisa omnye oqinisekileyo ngesikhundla sakhe (njengoko mhlawumbi asiyi kukholisa uDawkins) kodwa ngokuqinisekileyo, ndicinga ukuba isifundo seBhayibhile sinokukhokelela ekuqondeni okutsha kwimiba emininzi. Ngokubanzi imbono yam yeyokuba akufuneki kubekho ukuphikisana phakathi kokuziphatha komntu kunye noko kubhaliweyo kwiTorah njengoko uAbraham wakhalayo ebusweni bokutshatyalaliswa kweSodom. Ke ngoko ndicinga ukuba ngenene ibhayibhile iyodwa ayanelanga ukwenza umbono wokuziphatha ukusuka ekuqaleni kodwa iyanceda.
2. Andiqondi ukuba isibakala sokuba kunokwenzeka ukuziphatha kakuhle ngaphandle kokuzibophelela ngonqulo sibonisa njani ukuba kukho iindidi ezimbini. Anditsho ukuba unqulo kuphela oluziphethe kakuhle kodwa ngokuqinisekileyo injongo ye-mitzvos yodidi olufanayo. Inyaniso yokuba umntu akasoloko ekwazi ukuqonda incasa ye-mitzvos ayifuni ukwamkelwa kodidi "lonqulo". Ngamanye amaxesha siswele umxholo wembali wokuqonda ngokuchasene noko kunyanzelekileyo kubonakala kodwa oku akuthethi ukuba isizathu sokuziphatha asikho. Ngokukodwa ekubeni ungakandinika inkcazo efanelekileyo "yexabiso lenkolo." Okwangoku, andinakucinga ukuba kukho udidi "lwenkolo" endingayaziyo ukuba yintoni "ukugqiba imingxuma".
1. Akufuneki kubekho ukuphikisana, kodwa umbuzo kukuba ngaba kukho ithuba lokuhlaziya. Ngaba umntu unokusifumanisa isifundo seBhayibhile esingamkelekanga kuye aze aguqule imbono yakhe emva kofundisiso lwakhe. Andicingi ukuba oko kuyenzeka. UAbarnel owabugatyayo ubukumkani wafumanisa ingcamango yakhe eBhayibhileni, noMaimonides ongazange akukhanyele wakufumana ukukhawulwa kwakhe. Kunjalo ke nanamhlanje.
Kucacile ukuba nayiphi na isifundo kuyo nayiphi na intsimi kwaye kuyo nayiphi na incwadi okanye ifilimu ivula imibuzo kwaye inokutshintsha iimbono. Kodwa utshintsho luya kwenziwa kwinkqubo yangaphakathi kwaye kungekhona ngenxa yegunya leBhayibhile (ukuba ekubeni ndifumene isigqibo esahlukileyo apho ndiya kuzinyanzela ukuba nditshintshe isikhundla sam kumcimbi othile).
2. Andinayo inkcazelo yokubaluleka konqulo. Kodwa njengomzekelo ndithi intlawulo yomfazi kaCohen owazama ukwahlukana nomyeni wakhe ayibonakali kum njengentlawulo yenjongo yokuziphatha. Injongo yawo kukugcina ubungcwele bobubingeleli. Olu lusukelo lonqulo nokuziphatha okubi. Kwanokuvalwa kokutya inyama yehagu akubonakali kum njengesithintelo esinjongo yayo ikukuziphatha. Kunokuhlala kusithiwa kukho injongo yokuziphatha esingayiqondiyo sonke. Le yingxelo engenanto, kwaye andiboni sizathu sokucinga njalo.
Ingxabano yam yayikukuba ukuba injongo ye-mitzvos iziphatha kakuhle, ngoko i-mitzvos ingaphezu kwamandla (ubuncinci namhlanje). Emva koko, injongo yokuziphatha inokufezekiswa ngaphandle kwabo (kwaye kule nto ndizise ubungqina obuvela kubantu abaziphatha kakuhle abangabotshwanga yi-halakhah). Ngoko yintoni injongo yokugcina umthetho? Ziziphathe kakuhle kwaye wanele.
1. Kodwa namhlanje ndinokuza ndize ndigqibe phakathi kwengxabano kaMaimonides noAbarbanel ndize ndigqibe kwelokuba imbono kaMaimonides ibonakala ikude lee kubulula bezi ndinyana ngokwezixhobo zokutolika zofundisiso lweBhayibhile. Oku ngokuqinisekileyo akuthethi ukuba ndiyazinyanzela ngokuzenzekelayo kodwa njengoko usifundise (njengoko ndiyayiqonda) ngokwendlela yokwenziwa akukho nto efana nokutshintsha kwesikhundla ngokuthe ngqo kwiingxabano kodwa kuphela kwinkqubo yokuthetha. Ngoko ke ndicinga ukuba ukufunda iindinyana ngenkolelo yokuba esi sisicatshulwa esinegunya ekupheleni kwenkqubo kungagqiba ekubeni kutshintshe imbono.
2. Kwakhona andiqondi ukuba kutheni ukudala udidi olungenayo inkcazelo kungenanto engenanto kunengxoxo yam yokuba asiyizuzanga yonke inzuzo yemithetho. "Ixabiso lenkolo" ukuza kuthi ga ngoku alithethi nto kum, libonakala lizalisa imingxuma ngokwenene. Ngokuphathelele umbuzo wokuba kutheni ukugcina i-mitzvos ukuba kunokwenzeka ukuba ube nokuziphatha ngaphandle kwe-mitzvos. Ndicinga ukuba kunokwenzeka ukuba uphendule mhlawumbi nge-mitzvos kunokwenzeka ukuba ube nokuziphatha okungaphezulu, okanye ukuba le nto yayithetha izilumko xa izilumko zisithi "i-mitzvos ayinalutho kwikamva elizayo". Mna ngokobuqu ndicinga ukuba ngokwenene ezinye mitzvos ziye zayigqiba indima yazo yembali ezifana ubukhoboka kwaye abanye basalindele ukuqonda kwabo.
1. Emva koko wenze isigqibo. Umbuzo ngowokuba kutheni ungabaqinisekisi abo bacinga ngendlela eyahlukileyo kweyakho? Ke ngoko ndiyathandabuza ukubanakho ukuqulunqa iimbono kunye nemilinganiselo evela eBhayibhileni kunye neHalacha. Kuwe kubonakala ngathi nguAbhabhabheli kodwa kum kuyacaca ukuba kungenxa yokuba awungowasebukhosini. Thetha nobukhosi kwaye uya kubona ukuba bakhupha izibonakaliso kwaye babonise umbono ochaseneyo (ochasene noko ubhalayo ngokombono wam unendawo). Kodwa umbuzo kakumkani ngumzekelo ombi, kuba iTorah ibhekisela kuyo ngokucacileyo. Ndithetha nge-halakhic engacacanga kunye nemibuzo yeengcamango. Ngomlinganiselo ofanayo nawe ungandizisa ukuba iTorah ithethelela ukholo kuThixo.
Thatha lula, inyani yeyokuba ayikhokelela kutshintsho kwimbono.
2. Inyaniso yokuba into ayinayo inkcazo ayithethi ukuba akukho sizathu sokuthetha ngayo (kwaye kungekhona njengama-positivists). Amagama ka-Muharram R. Piersig ayaziwa kwincwadi yakhe ethi Zen kunye noBugcisa boLondolozo lwezithuthuthu kwinkcazo yengqikelelo yomgangatho, nakwinyani yokuba amaGrike (akhohlakeleyo) abetha iingqondo zethu ngento yokuba yonke into kufuneka ichazwe. . Ukuba ucinga ukuba ndicinga ukuba uya kufikelela kwisigqibo sokuba awuyazi indlela yokuchaza ingcamango yexabiso lokuziphatha ngokunjalo. Akukho ngcamango isisiseko inokuchazwa. Ndiniphathele umzekelo wexabiso lonqulo: ubungcwele bobubingeleli, ubungcwele betempile, nokunye okunjalo.
Uze nomzekelo wobukhoboka, kodwa wazenzela ubomi obulula. Ndithetha ngobuninzi beTorah kunye neHalacha. Abazange bayifeze indima yabo, kodwa abazange babe nexabiso lokuziphatha. Ngoko zenzelwe ntoni? Uthetha inkcazo yethiyori yokuba nge-mitzvos umntu unokuziphatha ngakumbi. Andiboni nto ibonisa ukuba. Hayi ekuhloleni i-mitzvos kunye nokucwangciswa (uninzi alunanto yakwenza nokuziphatha), okanye ekuqwalaseleni inyaniso ngokwayo. Ke ngoko, ngokoluvo lwam, ezi zonwaba kakhulu kwaye ayingombono wenyani.
Ngokolwazi lwam olungcono, ubona ukusekwa kombuso njengesiganeko sendalo (ngaphandle kokungenelela kukaThixo). Ukuba kunjalo, luluphi uzuko oluya kuThixo olufanele luthethwe kulo mongo?
Enyanisweni, ndiyaqonda ukuba namhlanje akukho nxaxheba kaThixo kwimbali, kungekhona nje ekusekweni kombuso (kwaye nokuba kukho andinayo indlela yokwazi apho kwaye kwenzeka nini). Ke ngoko, xa kusenzeka into eyonwabisayo (= "ummangaliso"?) Lithuba kuphela lokuthetha indumiso njengesivumo sokudalwa kwehlabathi kunye nendalo yam.
Andizange ndiqonde kuluvo lwakho, yintoni kanye kanye umahluko phakathi kokuzinikela kwi "Dina Damlakhuta Dina" eyayigxininiswe kwaye isemthethweni kwi-halakhah naphantsi kolawulo lweeNtlanga ekuthinjweni, kunye nemeko namhlanje, mhlawumbi uthetha ukuba ngasentla. Umgaqo wawusebenza kuphela kwimithetho ephakamileyo Kwiindawo ezongezelelweyo kunye nemilinganiselo yendalo yonke kunye nokunye okunjalo?
Ndiya kucaphula isicatshulwa kumazwi akho: “Njengenxalenye yombandela ofanayo, saqhelana nesibakala sokuba yonke into yayiyiTorah yaye yonke into yayihamba. Ukuba abukho ubomi bomntu obuqhelekileyo, kwaye ngokuqinisekileyo akukho xabiso, ngaphandle kwe-halakhah. Ukuba yonke into kufuneka iqhutywe kwaye imiselwe ngabalamli kunye noorabhi. Kodwa namhlanje kukho ithuba lokubuyela kwisiqhelo. Abantu bakwaSirayeli banomlinganiselo wesizwe wehlabathi kwiBH (BH ekungekhona kubuzwe kodwa ekubuyeni komlinganiselo wehlabathi wobomi bethu sonke. Bambi baye babhekisela kuyo njengokubuyela kwethu kwinqanaba lembali). Akukho sizathu sokuqhubeka sibambelele kwifomathi esiyiqhelileyo ngenxa yeepathologies zembali ezahlukeneyo. ” Kwaye ngenxa yoko ndiyabuza: emva kwayo yonke loo nto, i-halakhah nangexesha apho "ngenxa yezono zethu sagxothwa emhlabeni wethu," nangona kunjalo sasiphantsi kolawulo oluthile oluzigqibo zalo (eziphuma kwi-arrays ngaphandle kwe-halakhah) ndandinesiqinisekiso se-halakhic. , ngokubhekiselele ekufakweni kwinqanaba elithi "Dina Damlakhuta Dina", ngoko yintoni imilinganiselo ebalulekileyo eyongeziweyo kwingcamango?
Ngethemba ngoku ndizicacise ngakumbi.
Ndaqonda. Kodwa ulawulo phantsi kwabanye abantu luyakhathaza kwaye alunqweneleki kuthi. Kuyinyani ukuba iDina Damlakhula ine-halakhic esemthethweni, yintoni ke? Ngaba oko kwakuthetha ukuba kulungile ukuhlala phantsi kodonga uFranz Josef? Uvuyo kukuba sibuyele ekulawuleni ubomi bethu ngokwethu kwaye kungekhona ukuba inokuqinisekiswa kwe-halakhic.
Enkosi kakhulu ngokucacisa izinto! Uya kuzuza imiyalelo kunye namandla angqalileyo.
Ukuba inzilo ibisisisiganeko nje sesizwe ucinga ukuba ngebesindile? Ngaba ngokwenene umsitho oqhutyelwa kummandla karhulumente unokuthabathel’ indawo umthandazo owenziwa kuzo zonke izindlu zesikhungu?
UkuQothulwa Kwesizwe sisiganeko sobukhulu obunamandla ngakumbi kwishumi leTevet okanye uGedaliya ngokukhawuleza. Ngokoluvo lwam akukho mathandabuzo okuba eyona ndlela yokuyidlulisela kwizizukulwana ezizayo lusuku lwenkolo yokuzila, olulusuku lokuzila ukutya njengesiqhelo. Bangaphi abantu (bonqulo) obaziyo abamaziyo uKumkani uYehu? Kwaye bangaphi abamaziyo uGedaliya Ben Ahikam?
Kwenziwe ntoni? AmaYuda azikhumbula kakuhle izinto eziphathelele ukutya, enoba yiholide okanye kukuzila ukutya. Imbali ibonise ukuba isebenza ngcono kakhulu. Kwaye ubungqina bokuba akukho nanye yeeholide zesizwe zamaYuda ezisindileyo (Megilat Ta'anit) ngaphandle kwemihla eyamkelwa kwiHalacha.
Eli libango eliluncedo. Ndijongana nombuzo wokuba i-halakhah ifuna okanye ilindele ukuseta usuku olunjalo lokukhumbula. Umbuzo weyona nto isebenzayo wahlukile kwaye kufuneka uxoxwe ngokwahlukeneyo.
Ngokuphathelele umbuzo wesibini, uluvo lwam kukuba ukuba bayalibala - baya kulibala. Ngaxa lithile iziganeko ziba kude kwaye zingabalulekanga kangako (akubonakali kubalulekile kum namhlanje ukukhumbula uGedaliya okanye uYehu). Amagqabantshintshi akho asekelwe kwimbono ebanzi yokuba inkolo kunye ne-halakhah kufanele ukuba zibonelele ngeenkonzo kwimilinganiselo yelizwe kunye neyehlabathi jikelele. Andivumelani naloo nto.
Ndive izinto ezininzi ngawe, kususela kwimini yokufundisa kwakho eYeruham, kubahlobo bakaRabhi u-Uriel Eitam.
Ndifunde ngomdla inqaku lakho malunga nokumisela ukuzila uSuku lokuQothulwa kweNkohlakalo, ndivumelana nobuninzi bezinto.
Ndiye ndeva amaxesha amaninzi kuRabbi Amital ongasekhoyo: "Ayiyiyo yonke into imbono yeTorah." "Ayiyiyo yonke into efunekayo kukuthethwa ngeDa'at Torah" kunye nokunye
Vuyani ngamazwi enu malunga nendumiso ngoMhla weNkululeko.
Kunokwenzeka njani ukuba sincome ummangaliso owenzekileyo size sithi awunantsingiselo yonqulo? Okanye khange ndiyiqonde le uyithethayo.
Cinga ngenkcazo eyenziwe (ukwahlula) emva kokuya kwindlu yangasese. Ngaba ukuvuma kwethu kuThixo ukuba uvule imingxuma yam kunento yokwenza nonqulo? Ngaba isidlo sakusasa endisibulisa ngaphambi nasemva kwaso sinemilinganiselo yonqulo? Kum ilizwe lifana nezindlu zangasese okanye isidlo sakusasa.
Ngokuphathelele ukudumisa ummangaliso, ngomnye umbuzo lowo. Umbono wam kukuba akukho mimangaliso namhlanje (okanye ubuncinci akukho nto ibonisa ukuba kukho), kwaye akukho nxaxheba kaThixo emhlabeni. Xa kusenzeka iziganeko ezivuyisayo kuthi, ezinjengokumiselwa korhulumente, kusisiqalo sokumbulela uThixo ngokudala ihlabathi nendalo yethu. Kodwa ndiya kwandisa oko eGaza (?) Kwincwadi endiyibhala ngoku malunga ne-theology yangoku.
Kodwa ngaba sinegunya lokuzilungisa iintsikelelo ngokwethu ngenxa yoMhla weNkululeko?
Oku kufuneka kuxoxwe. Ubuncinci kwiindlela ezithile (i-Meiri) kusemthethweni ukuncoma kuyo yonke imimangaliso yosindiso kunye nokuvuma, kwaye kubonakala ngathi umntu kufuneka asikelele ngaphandle kommiselo okhethekileyo. Njengentsikelelo ekutyeni iapile ngalo lonke ixesha sisitya kwaye kunganyanzelekanga ukuba silungise iintsikelelo kuwo onke ama-apile.
Kuyo nayiphi na imeko, ngokuqinisekileyo akukho mda wokudumisa ngaphandle kwentsikelelo.
Kwaye kukho indawo enkulu kaSabra ukuba nokuba ngentsikelelo akukho mda. Ukuba u-Israyeli emva kommangaliso we-Chanukah wayeza kuthi i-Hallel ekusikeleleni ngokwabo ngaphandle kokulawulwa kwezilumko, kwaye kukho ingxaki ngaloo nto? Nabanye bangaphambili basikelelwe ngesiko, kwaye kulo mbandela kukho ingxubusho yentsikelelo yendumiso ngokwayo. Kodwa kuloo nto ndiyathandabuza, njalo njalo.
Kunzima kum ukubona iLizwe lakwaSirayeli "njengenkonzo."
Abantu bakwaSirayeli babuyela kwaSirayeli emva kweminyaka eyi-2000. Kubi kakhulu ukuba urhulumente awuzange usekwe kwiminyaka engama-20 ngaphambili….
Enkosi kurhulumente kukho iqela leposikhadi. Urhulumente ozimeleyo wabuyela kubantu bakwaSirayeli. Amabinzana akwiSilumko abizwa ngokuba “yimihla kaMesiya.”
Indumiso ayipheleli nje kummangaliso kodwa yosindiso
Ummangaliso asikokwaphula nje imithetho yendalo kodwa ukwaphula imithetho yembali okanye ingqiqo.
Kuphi kwenye indawo apho sabonisa khona ityala apho abantu abasasazekileyo eziphelweni zomhlaba babuyela emhlabeni wabo emva kweminyaka engama-2000?
Uyamhlalisa. Umphuhlisi. Iqela leposikhadi lenziwe kuyo. Ngowuphi omnye umzekelo okhoyo?
Ngaba abaprofeti babengayi kunqwenela oku embonweni wabo?
Ngapha koko, ukuba iminyaka engama-80 eyadlulayo ngebaxelele uMordekayi waseMorocco noLibish wasePoland ukuba banjalo. Oonyana babo nabazukulwana babo baya kuba kunye kwilizwe lakwaSirayeli phantsi kolawulo loonyana bakaSirayeli, bavelise iintsapho kunye. Ngaba banokuthi ifana nendlu yangasese?
Xa ndithelekisa iLizwe lakwaSirayeli neenkonzo, ndandingathethi ukuba urhulumente akanaxabiso okanye unezothe njengeenkonzo. Ndandifuna ukuthi urhulumente (ubalulekile) uthetha kuthi, kwaye akukho nto ingaphezulu. Ndivuya kakhulu kuba le ndlela isesandleni sethu, kwaye eneneni iminyaka emininzi ayikabikho, kodwa andiyiboni njengexabiso lenkolo. Ubukhulu becala lixabiso lesizwe. Inene ukuza kukaMesiya kukwalidinga elifana nokunisa kwemvula. Imihla kaMesiya nayo ayinaxabiso lenkolo kuba akukho kugcinwa kwe-mitzvos, kodwa eyona ndlela iya kusivumela ukuba sigcine ii-mitzvos ezininzi (iTempile, njl.njl.). Ukuba sisityebi kukwayindlela yokugcina imiyalelo, yaye akwenzi ubutyebi bexabiso lonqulo. Ilizwe liyindlela, kwaye into yokuba ilahlekile kuthi ixesha elide kwaye sasiyifuna kwaye sihlupheka ngaphandle kokusibhida kakhulu (njengendoda ehluphekileyo ebona imali njengexabiso ngenxa yokubandezeleka kwakhe) .
Ngokuphathelele imimangaliso kukho ukubhideka okunengeniso enkulu. Lonke ukungenelela kukaThixo ehlabathini kungummangaliso. Ukungenelela kuthetha ukuba bekufanele kwenzeke into ethile ngaphandle kokungenelela (ngokwemithetho yendalo) waza uThixo wangenelela kwaza kwenzeka enye into. Oku kuthetha ukwaphulwa kwemithetho yendalo. Oko kukuthi, ummangaliso. Akukho kungenelela kukaThixo kwindalo engengommangaliso.
Ububodwa bokubuyela kwethu kwaSirayeli yaziwa kakuhle kum kwaye ndiyavumelana nayo. Ngaba loo nto ithetha ukuba bekukho ummangaliso apha? Intandabuzo enkulu emehlweni am. Esi sisiganeko sembali esingaqhelekanga.
Ndandingawuqondi umahluko. UThixo wathi uyakuthumela umprofeti okanye kuya kuna. We did mitzvot, uzogqiba nini ukuba unganethi? Emva kweveki? ngenyanga? isizukulwana? Uza kwenza njani isigqibo sokuba wenze mitzvot okanye hayi? Mingaphi imiyalelo ekufuneka yenziwe? Abanye abantu? Yonke into elapha ayinakuphikiswa ngokwenene. Ingaphezulu ngumbuzo wezimvo jikelele hayi wokuchasa. Njengoko ndibhalile, isigqibo sam sokuba uThixo akangeneleli ayisosiphumo sokuchaswa ngokungathandabuzekiyo kodwa ngumbono.
Ngoku ndiyayiqonda into oyithethayo ngokuthi "inkolo" kwaye ngenxa yoko ndiyawaqonda amagama e-State of Israel kunye nokusekwa kwayo akukho ntsingiselo yonqulo, ndibona igama elithi "inkolo" intsingiselo ebanzi kwaye ngoko ke emehlweni kaKibbutz Galuyot njl. inentsingiselo enkulu yonqulo.
Kuyafana nangemihla kaMesiya, kwaye andingeni apha kumbandela wokuba kuyacaca na ukuba kuya kubakho itempile yokuza kukaMesiya, ayilulanga kwaphela.
Ngokuphathelele imimangaliso, ndinoluvo lokuba "ngomso ilanga liya kuphuma" - oku akuwona ummangaliso. Ukuzaliseka kwemithetho yendalo akungommangaliso.
Ndiyabelana ngokupheleleyo ngesikhundla sokuba yonke into ayimangaliso, njengoko abanye abantu bathanda ukuthetha.
Kodwa ukwenza amaqela abathinjwa nokubuyela kwaSirayeli emva kweminyaka engamawaka amabini, into engenakulinganiswa nanto phakathi kwabanye abantu, asiyonto yemvelo.
Kuyinyani ukuba akukho kuwela ulwandle okanye "ilanga eGivon Dom" apha, kodwa kukho into engaqhelekanga apha, eyodwa kuhlobo lwayo kunye nohlobo. Ngokucacileyo nakweli nqaku asivumelani.
Iingxoxo ezimbini kufuneka zahlulwe: 1. Ukusekwa korhulumente kunye nokuhlelwa kweqela labathinjwa kwakungummangaliso. 2. Ezi zibini zinentsingiselo yonqulo. Akukho kuxhomekeka kumacala omabini. Kunokubakho ummangaliso ongenantsingiselo yonqulo (njengokuvula imingxuma kwabo bacinga ukuba ngummangaliso), kwaye ngokuqinisekileyo kunokubakho intsingiselo yonqulo kwaye ayisingommangaliso. Ndiphikisa ukuba akukho nto ibonisa ukuba lo mmangaliso (i-anomalies ayikho ummangaliso), kwaye nokuba akukho kubaluleka kwenkolo (ndiyiZionist yehlabathi). Njengoko kukhankanyiwe, kunokwenzeka ukuba ungavumelani kwelinye lala mabango mabini ngokwahlukeneyo okanye kuzo zombini kunye.
Ngaphezu koko, kunokwenzeka ukuba eli lizwe libe kukukhula kokukhululwa kwethu (inshallah), kwaye kuya kwakhiwa itempile kulo kwaye ukuhlangulwa kuya kuza ngalo. Ukanti ayinantsingiselo yonqulo emehlweni am. Liqonga lehlabathi elenzelwe iinjongo zehlabathi kunye neentshukumisa zehlabathi. Izenzo ezinjalo azinantsingiselo yonqulo.
Oko kukuthi, intsingiselo yonqulo, ngokoluvo lwakho, ifuna injongo yonqulo?
Isenzo soluntu sinentsingiselo yonqulo kuphela ukuba senziwe ngenjongo yonqulo (A.A. Leibowitz). Nangona i-mitzvos ayifuni njongo kodwa ikwi-mitzvos kuphela (ngenxa ye-sabra yomxholo njengegama elingaqhelekanga). Kwaye ngokukodwa ukuba ndibonise kwinqaku (emini, ukusilela kwehlabathi ekukhohliseni) ukuba zonke iimbono zemithetho zifuna ukholo. Ukomisa imigxobhozo engenzelwanga izulu nangenxa ye mitzvah (ukuhlaliswa kukaSirayeli) akuloxabiso lonqulo. Inexabiso lesizwe.
Oku ngokuqinisekileyo yimeko eyimfuneko kuphela kodwa akwanelanga. Isenzo ngokwaso kufuneka sibe nexabiso lenkolo, kwaye yiTorah kuphela echazayo. Umntu omi ngonyawo olunye ngenxa yezizathu zonqulo ezaphukileyo akanaxabiso lonqulo kulo.
UMaimonides kwiMo'an kwiPentatiki wahlula phakathi komntu owenza “ezithweni zakhe” nomntu owenza oko ngenjongo nangeenjongo.
Kucacile ukuba yintoni inqanaba eliphezulu.
Umbuzo ngowokuba ngaba siyakuchaza nasiphi na isenzo esingesosenkolo esenziwa ngumntu ngaphandle kwenjongo? Ndiyavuma njengomgaqo kodwa esi sisifundo esisisinyanzelo kwabaninzi abavela kwa-Israyeli, kusekho abanye abaququzelelayo kunye namaxabiso omsebenzi "kungekhona ngenxa yawo".
Kwinqaku lam malunga ne-razor ye-Oakham ndachaza ukuba ukungenzi ngaphandle kokholo akukwenzi oko ngenxa yayo. Ayilonqulo kwaphela. Jonga iRambam Sufach evela kooKumkani. Lowo ukholwayo kwaye engenzi ngabom, apha umntu kufuneka ahlule phakathi kwe-mitzvos kunye noko kungachazwanga njenge-mitzvah. Ukufunda okulungileyo kuyinto entle, kodwa ayisosixhobo sokucacisa inyaniso. Yaye wabona kubahlalutyi (uRambam noRabbeinu Yonah nabanye) ngeMishnah ekwiAvot (uHoy Dan ewonke umntu osekunene) ukuba bayibhala exubusha apha kuphela ukuba kusengqiqweni, ngokuchaseneyo noluvo oluqhelekileyo. Kwaye ndabhala ngayo kumanqaku am e-BDD kwi-razor ye-Oakham.
Ukuba urabhi angacacisa ukuba uthetha ukuthini ngokuthi "ixabiso lenkolo." Oko kukuthi, lixabiso lenkolo kuphela ukugcinwa kwe-mitzvah ngokwayo (inkcazo exolelwe ngurabhi kuba ndiyaqonda ukuba akayithandi, uLeibowitzian), ingaba yiyo nayiphi na into enceda ukuthotyelwa kwe-mitzvah eyenziwa ngonqulo? ukuqonda, nangaphaya koko: Ngaba ixabiso lenkolo ukuba akunjalo.
Enkosi, kwaye uxolo ukuba ndibuyisela urabhi kwiingxoxo ezindala kunye nezilibele ukusuka entliziyweni.
Uxolo olukhulu Ixabiso lenkolo lithetha ixabiso emsebenzini kaThixo. Ixabiso lenkolo ayingomyalelo nje kuba unqulo lukaThixo lubanzi kunomthetho. Kwanangaphambi kweShulchan Aruch, inexabiso lonqulo. Ngokwenene, imeko ikwafuneka ukuba yenziwe ngenxa yomsebenzi kaThixo.
Okona kulungileyo kuluvo lwam urhulumente akanaxabiso lonqulo nangayiphi na indlela. Urhulumente yeyam/yethu imfuno hayi ixabiso. Ndifuna ukuhlala phakathi kwabantu bam nakwiLizwe lakwaSirayeli elikhoboka lethu lembali. yiyo leyo.
Ngokubhekiselele kurhulumente olawulwa yi-halakhah umntu kufuneka axoxe ngexabiso analo (ekubeni urhulumente akaze abe sisixhobo nje sabemi), kodwa ilizwe elifana nelethu alinalo ixabiso lenkolo.
Malunga neNFM, andazi ukuba ufuna eyiphi iNFM (ngaphandle kokungcwaliswa kowasetyhini). Ezi zizinto ezimbini ezahlukeneyo ngokupheleleyo: yimfuneko kwaye lixabiso. Kuthekani ukuba into entle okanye elungileyo? Ezi zizinto nje ezimbini ezahlukeneyo.
Bendifuna ukuthi, ithini intsingiselo yexabiso lenkolo ngaphaya kwenkcazo oyibekileyo? Yintoni emele ukuba ngumahluko phakathi kwe-mitzvah, okanye ixabiso lenkolo, kwaye yintoni endincedayo kubukho bayo? Okanye ngaba andizange ndiwaqonde amazwi karabhi yaye nalo ngumbuzo ongenanto, ekubeni le ngcamango ingenantsingiselo ingaphaya kwengcaciso yayo? Ndicinga ukuba kunokwenzeka ukuchaza ukuba yintoni umehluko phakathi kokuhle kunye nokuhle, nangona kungekhona ngamagama, kunye ne-NPM phakathi kwabo. (Umzekelo: akubonakali kum ukuba ndiya kufumana umntu oya kunikela ngobomi bakhe ngenxa yobuhle, ngelixa ewe ewe, ngenxa yokuba ubuhle abunayo intsingiselo ebalulekileyo ngokwaneleyo, ubuncinane ngokombono wam).
thumela iSibhalo. Ubona urhulumente (njengoko ndisiqondayo) njengento yexabiso lesizwe kuphela, kwaye kungekhona njengokunceda nokugcina i-mitzvos. (Nangona usithi into encedayo ekugcinweni kwemithetho ayijongwa njengexabiso lonqulo.) Ngokwendlela yakho kutheni ngenene usithi indumiso? I-trigger yokuvuma malunga nokudalwa kwehlabathi ingaba nokuba ndifumene umvuzo okanye enye incwadi kaHarry Potter yaphuma, kodwa akukho mntu uqhelekileyo oya kuthi adumise. Ukuba ngokwenene urhulumente unexabiso lesizwe kuphela, kwaye akanalo ukuqaliswa kwinkqubo yonqulo lukaThixo, ngoko mna endaweni yakho andiyi kukubona njengento efanelekileyo yokudumisa. Urabhi uya kukwazi ukuchaza oko akucingayo kwaye umda uwela phi?
Enkosi, uxolo kwaye happy new year.
Kunzima kum ukuba nengxoxo ngamaxesha anjalo.
Akukho nto yexabiso lenkolo eza kwixesha le-mitzvah. Ngokwahlukileyo koko, i<em>mitzvah ingumzekelo wento ethile enexabiso lonqulo. Kodwa nakwindlela yokuziphatha kukho ukuxabiseka nokubaluleka konqulo (inciniba kuba kukuzaliseka kokuthanda kukaThixo). Ngokwahlukileyo koko, ukwanelisa imfuneko yokungazi akunaxabiso lokuziphatha okanye lonqulo. Umntu ufuna ilizwe ngendlela afuna ngayo isidlo sakusasa okanye indlu. Kukuzalisekisa imfuno kungekhona ixabiso. Xa imfuno ebalulekileyo ebomini bakho izalisekiswa (njengokusindisa ubomi bakho) esi sisizathu esikhulu sokuncoma. Andiyiboni into engaqondakaliyo apha kwaye yintoni efuna ukuchazwa.
Ngaba urhulumente uyayivumela imilinganiselo yonqulo ukuba ijongwe? mhlawumbi ewe. Kodwa isidlo sakusasa kunye nomvuzo nazo ziyasivumela.
Ukulandela kwezi ngxoxo zingentla ndingathanda ukubuza inani lemibuzo endiyibuzwayo ngokoluvo lwam kokubini kwinqaku nakwiingxoxo ezijikeleze oku.
A. Njengoko ndiqonda, uNgangalala akakholelwa ekuboneleleni ngengqiqo yokungenelela koMdali kunye nokudala "imimangaliso" efana neLizwe lakwaSirayeli, iqela labathinjwa, njl., ngakumbi ekubeni "imimangaliso" encinci "eyenzekayo" kumntu onje "imali" yawa kwindawo engalindelekanga.
Ndibuzile, [ngokwesihloko othanda ukusiveza kakhulu], malunga nendaleko ubhale ukuba abangakholelwayo kubukho bukaThixo bajonga i-evolution ngaphakathi kwemithetho ngelixa umi ecaleni ujonge imithetho engaphandle ubuze 'ngubani owadala le mithetho', kwaye xa ubona loo mthetho. yakhiwe ngale ndlela ikhokelela kwindalo, ugqiba Ukuba uThixo wadala umthetho ngale ndlela, oko kukuthi, uThixo wadala 'umthetho wendaleko'. Ukuba kunjalo, nangokumalunga nemimangaliso, kuyinyaniso ukuba ‘kwimbono ephangaleleyo’ nelula kubonakala kuthi yonke into iyindalo, kwaye ikhondo labantu bakwaSirayeli kwizizukulwana lineengcaciso zendalo, ezinjengokusekwa kwenkqubo yendalo iphela. Ilizwe lakwaSirayeli, kodwa ukuba sijonga ngaphandle kwaye sibuze Ngokufana noko kwaprofetwa ngabaprofeti kunye neTorah, mhlawumbi sinokuthi uMdali wayicwangcisa kwaye wayiyalela yonke le nkqubo 'yendalo' ngenjongo, kwaye ejonge ngaphandle kwenkqubo kunye nemithetho yendalo ngaphakathi. ngayo, inokunika umfanekiso wokubonelela? [Nangokumalunga nemimangaliso emincinci le angle yokujonga inokwamkelwa].
B. Omnye umbuzo, ngaba oku kuthetha ukuba anikholelwa kwimimangaliso ebhalwe kwiTorah nakuMprofeti, kwaye zibonwa kwimbono engaphezulu njengokukhanyela imithetho ye-physics enjengale: intonga eba yinyoka, isonka esihla sivela ezulwini. , Amanzi ajika abe ligazi, inqwelo yokulwa enamahashe esiphango, nokunyuka kwababingeleli.
Isithathu. Ukongeza, ithini le nto malunga nokukholelwa kwakho ekumazini uThixo malunga nezenzo zomntu, kubonakala ngathi ukunqongophala kokulawulwa akukuchasi ukwazi uThixo, kodwa kubonakala ngathi nzulu kukho iimpembelelo zezi nkolelo komnye nomnye, njl. Ingqikelelo 'yomvuzo kunye nesohlwayo' ngenxa yendlela yakho ayikho, kwaye ke amazwi akho athetha ukuba 'ihlabathi elilandelayo' yinkolelo yesilumko engenankxaso kwiTorah [ngokuqinisekileyo ndiyavuma, kodwa abaprofeti kunye nezibhalo zininzi inkxaso ecacileyo], ukungakholelwa kulo mgaqo, kukuphinda amazwi kaLeibowitz, Ukuba yonke 'intlawulo' kwi-mitzvah kukuba nje ndizimisele ukwenza njalo, ngaba oko kuthetha ukuba wena? Ukuba kunjalo ndiyathemba ukuba kucacile kuwe ukuba ababaninzi abaya kuthandabuza ukuthelela olu nqulo, kutheni ndizibeke kwinkqubo yemithetho ephelelwe lixesha nephelelwe lixesha [kwaye uyavuma ukuba imimiselo nemithetho emininzi itshitshisa incasa yazo ngokweminyaka nangeminyaka] kutheni kungenjalo ‘ yamkela’ kuphela inxalenye yaloo nkqubo yemithetho, wena kuphela Ofanelekileyo, yintoni ephosakeleyo ngemithetho yeLizwe lakwaSirayeli?
D. Kuvakala ngokusuka koko ukuthethileyo ukuba uyakholelwa kwingcamango ‘yeTorah evela ezulwini’ [ngaphakathi komda othile ekubeni ndandiqonda ukuba uyawamkela amanye amabango abahlalutyi beBhayibhile], yaye kungenjalo umele ukholelwe kwingcamango yeZibhalo ezingcwele. 'isiprofeto'. Kwaye ndabuza, kutheni nalapha ningasayi kusebenzisa ingqiqo efanayo [ikwavakala kuluvo lwam ukutsho], ukuba yonke into endingayiboniyo andinasizathu sokucinga ukuba ikho, oko kukuthi, phantse iminyaka engama-2500 akukho mntu uyibonileyo. isiprofeto ukuba siyini na kwaye sifanele siboniswe njani, yaye uyakholelwa Ngokusekelwe kwiziprofeto ezingabalulekanga ezazikho ngaphambili [isiprofeto sexesha elidluleyo sasilingana neli khondo: yenza okulungileyo, yenza okubi, kubi, zonke iinkqubo ezifike kamva ziyenzeka. ungaphambuki kwindlela yendalo], kutheni ungavele ucinge ukuba akukho nto inje ngesiprofeto kwaye yintelekelelo yabantu behlabathi lakudala kwaye njengoko ingekho namhlanje ayizange ibekho ngaphambili, kwaye njengoko thina kanye ucinga ukuba kukho imimoya kunye needemon kunye namakhubalo kunye nemiqondiso yezodiac kunye nezinye iintsomi ezintle, cinga ukuba kukho isiprofeto, ngokusisiseko ndibanga amabango akho ngamazwi akho, andinasizathu sokukholelwa kwisiprofeto ukuba a. Andiboni ukuba ikhona namhlanje. B. Ndiyakwazi ukucacisa zonke iziprofeto ngendalo. Isithathu. Ndinesiseko esibambekayo sokukholelwa ukuba ngaxa lithile abantu babengenamahlulo alungileyo kwaye babeyila ukuba baprofete okanye bakucingele oko.
A. Okokuqala, andazi ukuba imbeko yam ikholelwa ntoni okanye ayikholelwayo, ndisondele kwinto endiyikholelwayo (okanye andiyikholelwa). Ngokuphathelele endikukholelwayo, eneneni andinanto ibonisa ukuba kukho imimangaliso eyenzekayo kwihlabathi lethu. Mhlawumbi zikhona kodwa andiziboni. Oku akufani neengxoxo zam malunga nendaleko kuba kukho impikiswano enyanzelisa ubukho besandla esithe ngqo (umdali), kanti apha yinto enokwenzeka kuphela.
Ngapha koko, ummangaliso uchazwa njengokungenelela kukaThixo ehlabathini, oko kukuthi, utshintsho kwindlela eliphila ngayo. Hoy uthi intshukumo ngokwemithetho bekumele ukuba X kwaye uThixo wayitshintsha yaba Y. Logama nje ndinayo ingcaciso yendalo ngale nto yenzekayo, andiboni ukuba kutheni ndicingela ukuba kukho ungenelelo. Kwaye ukuba ngumntu ovelisa ukuziphatha kwemvelo, ngoko ndithetha ngaloo nto. Oku kudalwa kwemithetho.
B. Kwiincwadi zam ndiya kuchaza inkcazo yam kwiinkcazo ezingaphezu kwendalo kwimithombo eyahlukeneyo. Ngokubanzi, kunokwenzeka ukuba kwixesha elidlulileyo uThixo wangenelela ngakumbi (kwaye kwakukho imimangaliso kwaye kwakukho isiprofeto). Namhlanje andiboni naziphi na iimpawu zokubandakanyeka okunjalo kukaThixo.
Isithathu. Khange ndiqonde apha. Kuthekani ngokungabi nanxaxheba ekungabini liliso? Kukho ulongamelo lwezenzo zomntu kodwa akukho ngenelelo (ubuncinci hayi rhoqo).
Ukuzibophelela kwiTorah nakwi-mitzvah akukholele emvuzweni nakwisohlwayo kodwa kuxanduva lokwenza oko akuyalelayo uThixo. UMaimonides sele ebhale kumagqabaza akhe ngethemba labasebenzi lokuvuzwa nokoyika isohlwayo. Mhlawumbi kungenxa yoko ezi nkolelo malunga ne-UAV zadalwa. Kwaye mhlawumbi ziyinyani, kodwa andazi.
Umbuzo wokulinganisa, ngubani oza kujoyina kwaye ngubani ongayi, awubalulekanga kumbandela wenyaniso. Umbuzo ngowokuba ndinyanisile na hayi ukuba ndizothandwa. Ndiyabuchasa ubuxoki obungcwele (ukuthetha ubuxoki ukunamathisela abantu abaninzi emsebenzini kaThixo). Ukuba kuphela kungenxa yomzekeliso wendlovu kaMaimonides. Abo bathe babandakanyeka emsebenzini benza oko ngenxa yempazamo, ngoko basebenzela uThixo ongalunganga, kwaye ukudibanisa kwabo akuncedi.
Luluphi unxibelelwano kwimithetho yeLizwe lakwaSirayeli? Yaye nokuba lowo uzigcinayo uyaphuma kumsebenzi wakhe wonqulo? Kutheni ungathethanga ngemithetho yeFIFA (uMbutho weBhola)?
D. Nako oku kuya kucaciswa encwadini yam. Okunye oku kuxutyushwa kwiincwadi eziyinyaniso nezingazinzanga (kwingxoxo yobungqina bosuku). Apha ndiza kucacisa ngokufutshane. Nangona imithetho yendalo iqhutywa ngendlela efanayo ngamaxesha onke, kodwa abantu bayatshintsha. Kwaye oko babecinga ukuba bacinga namhlanje? Kwaye benza ntoni namhlanje? Bakhe banxiba ntoni namhlanje? Ngoko kutheni ucinga ukuba ihambo kaThixo ayitshintshi? Ukuba bekufuneka ndithathe isigqibo kungcono ndiyifanise nabantu hayi nendalo engaphiliyo. Akukho sizathu sokucinga ukuba uya kuziphatha ngendlela efanayo ngalo lonke ixesha. Ke ukuba uye wagqiba ekubeni ahambe kancinci emhlabeni, andiboni njengento engaqhelekanga okanye engaqondakaliyo. Ngokuchasene noko, ndide ndibe ne-hypothesis yokuba kutheni oku kusenzeka. Njengomntwana othi xa ekhulile uyise amshiye ngakumbi nangakumbi abaleke yedwa. Kukwanjalo ke nesimo sengqondo sikaThixo ngathi. Ukumka kwakhe asikokuncipha kwezizukulwana njengoko siqhelene nako, kodwa kukunyuka (ukuvuthwa) kwezizukulwana. Namhlanje sinokuqonda ukuba kukho inkokeli yekomkhulu nangaphandle kwemimangaliso. Sinobuchule obungokwentanda-bulumko ngokwaneleyo ukuba siqonde ukuba ihlabathi elilawulwa yimithetho emiselweyo linikela ubungqina obungakumbi ngoMdali kunehlabathi eliguquguqukayo. Ke ngoku awusafuni mimangaliso. Ubuncinane ukuba besiziphatha kwaye sicinga njengabantu abadala, njengoko kulindelekile kuthi. Kukho ngokwenene abanye abaneengcamango zobuntwana, kodwa kubo mhlawumbi kulindeleke ukuba bakhule.
Ukulandela le mpendulo, uthe "ngokuqinisekileyo kunokwenzeka ukuba kwixesha elidlulileyo uThixo wangenelela ngakumbi." Kodwa kukho iindinyana kwiTorah ezithetha ngokungenelela kwizizukulwana (kwaye ndayinika imvula ilizwe lenu ngexesha elifanelekileyo, kwaye iimvula zenu ndazinikela ngexesha elifanelekileyo, njl.). Kunokuthiwa njani ukuba uThixo (ekusenokwenzeka ukuba wayesazi ukuba wayeza kuluqhawula unxibelelwano ngaxa lithile) wabhala izithembiso “zomvuzo” awayezimisele ukuzizalisekisa? Ngapha koko, ukuba umzali uthembisa umntwana wakhe iilekese ukuze aziphathe kakuhle, kwanokuba umntwana ukhulile, kulindeleke ukuba umzali asigcine isithembiso sakhe, akunjalo? Kwaye ukuba ufuna ukuyeka ukulala ngesondo, ubuncinane kufuneka achaze ukuba kutheni (sakhula, njl.).
KwiTorah ikwathetha ngabaprofeti, iziprofeto nemimangaliso, kwaye nazo ziye zanyamalala. Itempile namadini akwabikho. Kunjalo ke nobukhoboka nangakumbi nangakumbi. Sifumene ukuba ngamanye amaxesha iTorah ithetha nabantu bexesha lokunika iTorah, kwaye kukho utshintsho olungayithethiyo iTorah. Umntu unokuthelekelela ukuba kutheni, kodwa ezi zizibakala.
Ngokuphathelele abaprofeti, iziprofeto, imimangaliso, itempile, amadini, ubukhoboka, njl. Kukho imizekelo kuphela yokuba zenzeka ngaxa lithile, kodwa kutheni sinokulindela ukuba nazo zibekho kwixesha elizayo? Kodwa malunga nomvuzo kunye nesohlwayo, u-Gd wabhala ngokucacileyo kwiTorah ukuba kukho unxibelelwano lwezizukulwana phakathi kokugcinwa kwe-mitzvos kunye nomvuzo othile, ngoko ndinesizathu esihle sokulindela ukuba olu nxibelelwano luza kubakho kwixesha elizayo, kwaye ukuba sifikelela kwisigqibo sokuba kunjalo. awukho ngumbuzo onamandla weenyaniso zeTorah, akunjalo? Ingcaciso kuphela endinokucinga ngayo kulo mbuzo ziingxelo ezinje: "Umvuzo we-mitzvah kwisiqithi sase-Alma Likha" kwaye ke kuya kufuneka sincothule izinto ezilula kwiindinyana ezinje "Kwaye ndininike iimvula zakho ngexesha elifanelekileyo" kwaye njengomzekeliso wemivuzo kwihlabathi elizayo. Kodwa kusenzima, kuba akukho Bhayibhile ilula kakhulu.
Khandiqonde. Umba wesiprofeto ubandakanya imiyalelo eliqela. Akufunekanga ukuba i-mitzvos ibe yezizukulwana ngezizukulwana? Inxalenye yomsebenzi kaThixo kukumamela uMprofeti kunye nobunkokeli bakhe basemoyeni kuthi. Le asiyomeko apho sasinomprofeti khona. Oku koko iTorah yakuthembisa kwaye yade yamyalela ukuba azame ukuva ilizwi lakhe. Umprofeti ukwayinxalenye yendlela yokuya emfazweni.
Izithembiso zokuba xa sigcina imiyalelo siya kunikwa imvula, zitolikwa njengezithembiso ezijongana nexesha apho imvula ixhomekeke ku-Thixo. Xa kuxhomekeke kuye ke kuya kunikwa ukugcinwa ngokulandelayo. Ngoku ugqibe ekubeni asinike kuba sikhulile, kwaye kuyacaca ukuba ukusukela ngoku ayisasebenzi. Usixelela ngokulula inkqubo yakhe: xa ndinikela into ethile kungenxa yokugcinwa kwemithetho.
Ngokuphathelele umprofeti, kubhaliwe encwadini yeDuteronomi: “Kuba kuya kuvela umprofeti phakathi kwenu,” akukho sithembiso sokubuyiselwa apha. Oko kukuthi, yonke imiyalelo enxulumene nokuvavanywa komprofeti yimithetho ekhoyo - ukuba umprofeti uya kusekwa, makube njalo. Njengokuba unxibe ingubo enamaphiko amane, kufuneka ubeke inquma kuyo. I-mitzvah ayisoze ime, kodwa ayisayi kuhlala isebenza. Kodwa into ekhethekileyo malunga neendinyana ezithetha ngomvuzo nesohlwayo kukuba zinonxibelelwano lokuba senza u-A. - ngoko uThixo uya kwenza uB. Ulwalamano ngokwalo aluxhomekekanga kuzo naziphi na iimeko. Kubonakala ngathi unxibelelwano luhlala lukhona. Nje ukuba sifikelele kwisigqibo sokuba olu nxibelelwano alukho, kubonakala ngathi kukho ukuphikisana neTorah apha. Unokuphikisa ukuba ayililo lonke ibango elikhoyo kwiTorah eliyinyaniso kwizizukulwana. Kodwa ke unyanzeliswa ukuba athi imithetho ngokwayo inokutshintsha.
Kutheni ungatsho nje ukuba ngelixa olu xhulumaniso lungenakubonwa ngokwenyani, kodwa lukhona ngendlela efihlakeleyo (fihla ubuso)?
Uzise iivesi ezithetha ngomprofeti wobuxoki. Ngapha koko, iivesi ezithetha ngomprofeti (Duteronomi):
Isithethi uMkrbc Mahic Cmni Ikim kuwe Ikok uThixo wakho uthixokazi uTsmaon: Ccl Asr Salt Mam Ikok uThixo wakho Bhrb uhamba ngeHkhl, uthi hayi Asf Lsma At Cole Ikok Alhi and At brigade Hgdlh Hzat not Arah One more, and La Amot: and said Ikok. uthixokazi uHitibo Asr Dbro: isithethi uAkim Lhm Mkrb Ahihm Kwaye Mhlawumbi uNeuvena: Kwaye iGeneral Islander, uThixo akayi kukhathalela i-wheragram: " Isiqithi saseShavua Jacka
Ngendlela, eyona nkcazelo ayiyo mitzvah ekhoyo kodwa yi-conditional positive mitzvah (njenge tassel). Phantse yonke i-positive mitzvah inemiqathango. I-presentential mitzvah yi-mitzvah engenako ukupheliswa kodwa igcinwe kuphela. Le mitzvot inokurhoxiswa (ukuba iimeko zikhona - nxiba ingubo kunye namaphiko, kwaye ungayenzi i-mitzvah).
Ngokuphathelele umbuzo wokugqibela, ngokuqinisekileyo kunokutshiwo ukuba uThixo uhlala engenelela kodwa xa sihlolisisa ukhawuleza angene emngxunyeni ukuze asibhidekise. Loo nto ivakala ingenakwenzeka kum. Ngalo lonke ixesha ndijonga okwenzekayo emhlabeni izinto zinenkcazo yendalo neqhelekileyo. Imithetho yendalo iyasebenza, kwaye xa uyivavanya elebhu, okwenzekayo kulindeleke ukuba kwenzeke. Akukho sizathu sokucinga ukuba kukho umdlalo ongaqhelekanga wokuzifihla apha. Obu ayibobungqina kodwa yingqwalasela eqhelekileyo. Xa ndibona umzimba oshukumayo, ukucinga kwam kukuba amandla asebenza kuwo kwaye kungekhona ukuba uThixo wagqiba ekubeni awushukumise ngaphandle kwamandla. Ngaphezu koko, ndicinga ukuba kukho imizimba ehamba ngaphandle kwamandla. Le yingcamango yenzululwazi eyamkelekileyo kwaye ivakala isengqiqweni ngokupheleleyo kwaye isebenza kum.
Kananjalo ezi ndinyana azibonisi ukuba umprofeti uya kumiselwa nini, okanye kangaphi. Ngokubanzi, amabango afana nala: UThixo uya kwenza i-X ayibango eliphikisayo (kuba akukho xesha libekiweyo lebango elichaziweyo). Kodwa amabango ohlobo: Ukuba u-X uyenzeka ngoko uThixo uya kwenza ukuba u-Y aphikiseke xa unikwe ukuba u-X kwenzekile kwaye u-Y unokulinganiswa. Ngoko kukho iindlela ezintathu zokulungisa ingxoxo yesibini. Okanye uthi uX khange yenzeke nyani. Okanye uthi u-Y akalinganiseki. Okanye ukutsho ukuba ibango lichasiwe. Kodwa ukuba iyaphikiswa, ayingombuzo olula malunga nokuchaneka kwamabango kwiTorah ngokubanzi.
Akukho nto apha iphikiswayo ngokwenzululwazi. Mingaphi imiyalelo ekufuneka yenziwe ukuze kune imvula? Bangaphi abantu abafanele ukuyenza le miyalelo? Ingakanani imvula eza kuna, yaye imele ine ixesha elingakanani? Oku kumalunga nokuphikiswa njengomcimbi woMprofeti.
Njengoko ndibhalile, ingcamango yam yokuba uThixo akangeneleli ayibangelwa ukuchaswa kwesayensi, kodwa kumbono oqhelekileyo (awubonakali ukuphazamisa). Inyani yile yokuba kule meko sikuyo ndibanga ukuba uThixo akangeneleli kwaye amakholwa amaninzi acinga njalo. Bacinga ukuba xa besenza i-mitzvos kunetha kwaye ndicinga ukuba akukho nxibelelwano. Amehlo akho ayabona ukuba imeko eyinyani ayikuqinisekisi okanye ukuchaswa kwayo nantoni na apha.
Ndiyayiqonda into yokuba ayiphikiswa ngokwesayensi, kodwa nembonakalo eqhelekileyo yanele ukuba ndingaphikiswa (hayi ngokwengqiqo-mathematika yegama).
Umahluko phakathi komcimbi woMprofeti kunye nomba weemvula kukuba unxibelelwano phakathi kwemithetho kunye nomvuzo kufuneka (ngokwengqiqo eqhelekileyo) lube lukhawuleza. Oko kukuthi, ukuba abantu bakwaSirayeli benza ngokuhambelana nemithetho, impendulo evela kuThixo iyavakala ukuba baya kufika ngexesha elifanelekileyo (zitsho kwiinyanga ezimbalwa kungekhona emva kweminyaka engama-700). Kodwa kumba woMprofeti, akukho sithintelo ngakuThixo ukuba athumele uMprofeti abe mnye kwiminyaka engama-3000. Akukho "ixesha elifanelekileyo" apha elinokuthi licingelwe.
Into endizama ukuyiqonda yindlela ovala ngayo ukuphikisana phakathi kwembono yakho kunye nomyalezo ocacileyo ovela kwiivesi. Ubhale ngaphambili impendulo efana nale: "Usichazela nje umgaqo-nkqubo wakhe: xa ndinika into ethile kukugcinwa kwe-mitzvos." Ndingayamkela loo ngcaciso. Kodwa nakuluvo lwakho kunzima ukuchaza lo mgaqo-nkqubo ukuba akawuphumezi?
Uyayenza. Ehlabathini xa enika into ilandela umyalelo. Kule mihla akaniki, ngaphambili wayenikela. Kule mihla akathumi abaprofeti kwixesha elidlulileyo awayebathumele. Lo ngumgaqo-nkqubo otshintshileyo (hayi unxibelelwano phakathi kokupha nomthandazo kodwa ukuzinikela).
Kwaye ngaphaya koko, njengoko ndikubhalele, uFook Hezi ukuba kwimeko yangoku kuye kwavela ingxabano malunga nokuba uyangenelela okanye hayi. Ngoko ke akukho mntu unokubanga ukuba inyaniso ngokwayo ibonisa ukungenelela, kungekhona ngenxa yezizathu zempembelelo kunye nengqiqo. Ngoko nokuba ndim ungabuza ukuba yintoni injongo yale ngxelo. Mhlawumbi ingxelo jikelele ukuba akufuneki empirically ihlolwe, kwaye ibonisa ukubaluleka mitzvos. Ukubaluleka kwe-mitzvos kusekho nanamhlanje. Iinyani ziyatshintsha kodwa isifundo singunaphakade.
Shalom VeYesha Rabbi uMichael,
Masiqale ngoMnumzana Tsitsro, ke intsingiselo yeDerech Eretz Kedma kwiTorah ayiyonto intsha kwaye ukuba ayiyontsingiselo kukho nje uhlobo lwemvukelo apha [ndinobuntu ngaphandle kokuba likhoboka likaGd]
Kuba yintoni eyona nto ibalulekileyo ukuba imimiselo i-halakhic okanye yezopolitiko ngaphandle kwemvakalelo yokuba imithetho yezopolitiko ivela kwimithetho [yomntu] ekhanyisiweyo kunye ne-halakhic iyacaphukisa kwaye ibuhlungu,
Ngokuphathelele uRabi wasePonivez, esi sibongozo si-halakhah, ngoko ke ukungaphumeleli kwakhe ukuthetha, kucacile ukuba akazange athi indumiso ngenxa ye-halakhah kwaye umceli akazange athethe ngesizathu esifanayo kwimbono yakhe,
Kukwacacile ukuba uthi uHillel kuba le yindlela ihalakhah eyamiselwa ngayo, njengoko ubungenakutsho ukuba bekungenjalo,
Ngokumalunga nokupapashwa kokunqongophala kolongamelo kwaSirayeli, kwakhona ukuba kutheni kunceda kwaye kubani,
“Umthandazo ongaphendulwanga,” umele ukuba usondele kakhulu ekusondezeni abantu bakwaSirayeli kuThixo nasekumdibaniseni noMdali wakhe.
Naleyo, nayo, uvela phi?
Ndikhalela ezochuku ezinje, uyindoda elumkileyo, ndixelele ngamava akho ahlukileyo.
Andiphikisani neemvakalelo. Wonke umntu kunye neemvakalelo zabo.
Nokuba uthi yonke into yahamba (kwaye oku akuyonyani), umbuzo usengulo mgaqo ubonisayo. Ezi ngcinga zifakwe kuyo.
Ukupapashwa kokungahoywanga kunceda kakhulu kwabo bavakalelwa kukuba bayasetyenzwa baze ke balilahle lonke isithethe. Ndidibana nenqwaba yabo. Abo bafumana umxholo owamkelweyo baya kuqhubeka nokuzijongela phantsi kwimiyalezo eqhelekileyo. Uluvo lwam kukuba umntu kufuneka athethe nakwabo bacinga ngokuchanekileyo. Ikwalicandelo ekufanele kubhekiselwe kulo. Kwa elibango lokuba inyaniso ayibalulekanga kodwa ixhalabele izidenge zasezilalini kuphela, kwaye umgaqo-nkqubo wobuxoki obungcwele bokungayipapashi inyaniso, yiyo ebangela ukuba siphulukene noonyana bethu abangcono kwaye sihlale nabo batya ezi ziluke. La ngamava am achaseneyo. Ubuzile, ndatsho.
Ngokuphathelele ukubambelela kwimithombo yamandulo ngokuchasene nenyaniso evela kuloyiko olufana nolwakho, andinanto ngaphandle kokuzisa iGemara kwiYoma Set AB:
UDamar Rabbi Yehoshua ben Levy: Kutheni ibizwa ngokuba ngamalungu e-Knesset- abuyisele isithsaba kuzuko lwayo lwangaphambili. Wathi uMoses kwindoda enkulu, eyoyikekayo, UYeremiya, wathi, Abo basemzini baseKarrin, endlwini yakhe, yini na? Khange athethe kakubi. Wathi uAta uDaniyeli, Bakhonziswa oonyana bakhe oonyanaoonyana bakhe? Khange ndithi hero. Kunye naye akakho kwaye bathi: Kunoko, bubugorha bobugorha bakhe oboyisa ithuku lakhe, elinika ubude kwabangendawo. Nantsi ke into eyothusayo: ukuba, ngaphandle kokoyika uThixo, luthini na uhlanga phakathi kweentlanga? Kwaye uRabbanan Hichi likhoboka lam kwaye libaluleke kakhulu kwiTeknat Datkin Moshe! Wathi uRabhi uElazare: Ekubeni esazi ngoSikelelwe ukuba uyinyaniso, ngoko abamxokisanga.
Ndihlala ndiwangqina amabango am kwaye ndingawatsali kwimithombo eyahlukeneyo, iLeibowitz (endingavumelaniyo nayo phantse kwanto) okanye nabani na ongomnye. Ukuba ufumana ukufana phakathi kwabo kunye neLeibowitz sisigqibo sakho, kodwa ayinanto yakwenza nengxoxo ngokwayo. Kulusizi ukuba nabani na oshumayela ukuze aqulunqe iimbono zehlabathi ngokwezalogeni zabanye ugxeka abanye ngesimo sengqondo esinjalo. Umntu ongafanelekiyo eMomo.
URabhi uMichael Shavuot Tov
Oko kukuthi, andicingi ukuba ukubonelela kunye nomthandazo kudidi lobuxoki obungcwele,
Ndiye ndakubuza ukuba uvelaphi,
Bavuma ngokupheleleyo ukuba abantu bayabuza okanye bayathandabuza ukuthetha inyaniso [yaye uninzi lwabo alukuthetheleli konke konke ukuthetha ngokumalunga nokujongwa nomthandazo ngokukodwa ngoxa inkoliso yamakholwa ivakalelwa kukuba ijongwe yaye ibekwe esweni wonke umntu]
Andicingi kwaphela ukuba ukubeka iliso kunye nomthandazo yinxalenye yemibuzo malunga nokuthetha inyaniso okanye ukungabikho kwayo okanye izinto ezifuna isityhilelo,
A] kuba akukho mfuneko yokuba kuthiwe kunjalo,
B] akanagalelo nangayiphi na indlela,
C] Ukuba uThixo unokumnceda umntu omsulwa aze angakwenzi, eneneni umbek’ ityala ngokungami phezu kwegazi lommelwane [liyinyaniso elokuba akangommelwane,] ngokweengcamango.
Ufanele wenze isigqibo sokuba ngaba ibango lakho likumxholo walo mbandela, ukuba oko ndikuthethayo akuyonyani, okanye ukuba uthi mandixoke "ubuxoki obungcwele" ukuze ndingakhubekisi ukholo olumsulwa lwabantu.
Andizange ndisole uThixo nganto. Ngewayedale ihlabathi elingayi kulawulwa yimithetho kodwa wagqiba (kwaye mhlawumbi wangcamla naye) ukuba akwenze ngokwemithetho. Phofu ke, ucinga ukuba wayengenakunceda ekuBulaweni Kwabantu Ngenkohlakalo okanye kuyo nayiphi na enye intlekele? Ngoko kutheni engancedi? Kutheni ucinga ukuba ndiyamgxeka ngaphezu kwakho? Kwaye ukuba ndivuselele ukuba abantu bahlupheke emhlabeni?
Kodwa zonke ezi zinto ziya kucaciswa kakuhle encwadini yam.
Okokuqala, andizange ndibone amabango afana nalakho ukuba akukho liso kuyo yonke into,
Kwaye andicingi ukuba bubuxoki obungcwele, ukuba kunjalo, kutheni ungayishiyi ngolo hlobo,
Ngokubhekiselele kwimithetho, ukulungiswa kwemithetho yendalo engazange itshintshe oko kukuthi akuzange kubekho ukubeka iliso, okanye imithetho enemihla?
Ngokubhekiselele kwi-Holocaust, njl., ukuba yonke into ihambelana ne-akhawunti, ngoko andiyazi i-akhawunti, kodwa ayiyi kuphikisana nokholo lwam olulula kwaye akukho mthwalo,
Ukuba akukho akhawunti [yongamela] emva iKushia ukuya eDukhta,
UHaftarah mhlawumbi unencasa, kulungile,,,
1. Ke ngoko?
2. Ndachaza ukuba kutheni ungayishiyi.
3 Imithetho yendalo, eyathi xa ingaziwa uThixo wazivumela ukuba aphambuke ngakumbi kuyo, kwaye kule mihla iqheleke ngakumbi mhlawumbi akakwenzi oko.
4. Kwakungekho mbuzo kwaye akazange arhuqe ndawo. Ukuba ucinga ukuba yonke into eyenzekayo iyathetheleleka (ngaphandle kokuba awuqondi), yintoni le undenzela nzima? Emva kwakho konke, nangona, ngokombono wam, yonke into ingabonakali, kodwa oko kwenzekayo kanye oko kufuneka kwenzeke, ngoko yintoni ingxaki kuThixo, ngokombono wam? Ngapha koko, akukho mntu ubandezeleka ngaphaya kokumfaneleyo.
Molo Rabhi uMichael
Ngoko ke, mhlawumbi kuhle ukuba oku kunjalo, ingxaki ivela kwiTorah evela kubaprofeti nakwiZibhalo, kunye nesizathu sokuba kwakukho imiba emide kuphela kwiTalmud iphikisana nalo mbandela, ingxaki yoqeqesho eChazal.
Ndichaze kakuhle ukuba kutheni ewe uyishiye,
Umbuzo ngulo, lithetha ukuthini, "ingaba linayo nayiphi na intsingiselo?"
Eyokuqala ayinangqiqo, eyesibini, ukuba ayinxulumananga nomvuzo nesohlwayo nangayiphi na indlela [ngaba kukho umvuzo nesohlwayo?] Ukuba akukho akhawunti [ukubeka esweni] mhlawumbi akunjalo, ngoko yintoni eseleyo ngokwenene ..ndiyazama ukucinga i-hypothesis ngaphandle kwempumelelo,
Capricorn uxolo. Ndicinga ukuba siphelelwe ngamandla.
Ilapha kanye khange ndizive ndidiniwe,
Kwaye nge-XNUMX ndingavuya ukufumana impendulo kulo mhlathi ndiwubhalileyo
Umbuzo ngulo, lithetha ukuthini, “Ngaba linentsingiselo eyahlukileyo,” liyavakala, okanye liyavakala?
Andiqinisekanga ukuba ndiyasiqonda isizathu sokuba izinto ezilapha zihlobana. Ndicinga ukuba ithetha ngesizathu sokuba uThixo adale umhlaba ukuba ulawulwe ngumthetho. Ndingacebisa incasa enye, umzekelo ukuba ufuna ukuba sikwazi ukuziqhelanisa nehlabathi. Ukuba ayiqhutywa ngokusemthethweni awuyi kukwazi ukuqikelela ukuba kuya kwenzeka ntoni na kuyo nayiphi na imeko kwaye awuyi kukwazi ukuphila.
Yonke enye into oyibhalileyo andiyiqondi. Kodwa ndicela ukuba akukho zinto zintsha ngokwenene, siza kuphelela apha. Ibisoloko isiko lam ukuphendula yonke i-imeyile, kodwa le ndawo ifuna ixesha elininzi kum, kwaye uninzi lwayo kukuphindaphinda izinto ezibhaliweyo nezithethiweyo.
Kuyabonakala ukuba kukho ukubhideka ngenene phakathi kwee-imeyile ezilapha kuba bendingasiqondi isizathu sokuba i-haftarah siyidinwe xa ndingazange ndiphinde ndiphinde kube kanye,
Ndiza kuphinda ndikufake oko ukubhalileyo kwaye ndiphendule, apha,
1. Ke ngoko? [Yayinxulumene nolwazi lomntu]
2. Ndimcacisile ukuba kutheni ungamshiyi [Mayelana nolawulo]
3. Imithetho yendalo, awathi xa engaziwa uThixo wazivumela ukuba aphambuke ngakumbi kuyo, kwaye kule mihla iqheleke ngakumbi mhlawumbi akayenzi [Isivakalisi endingasiqondiyo]
1] Ngoko ke mhlawumbi kulungile ukuba oku kunjalo, ingxaki ivela eBhayibhileni ebhaliweyo ngokuchaseneyo kwaye ithi kwakukho kuphela iyure kunye namaxesha aphikisanayo imiba emide kwiTalmud, ingxaki yoqeqesho kwi. Izilumko aziyi kuphikisana,
2] Ndicacisile kwaye ndiza kushwankathela, andicingi ukuba ukonganyelwa kwabucala kunye nomthandazo yinxalenye yemibuzo kunye nezisombululo malunga nokuthetha inyani okanye ukungabikho kwayo kwezo zininzi ubuthe uziva zisetyenzwa ngakumbi xa kungekho mfuneko yitsho ngokwenene,
4] Ubhale ukuba mhlawumbi uThixo unenqaku kwisigqibo sakhe sokungajongi kwaye asiyi kuphikisana nombuzo woxanduva olusebenzayo kuye,
Ndabuza, ukuba incasa yayo yinto esingayaziyo, enye ingqiqo, kuvakala kungenangqondo,
Ukuba incasa yinto engaqhelekanga kodwa eqondakalayo kodwa engahambelani nomvuzo kunye nesohlwayo [kwaye ukuba akukho kuphendula nokubeka iliso mhlawumbi akunjalo] andiboni cala apha,
1. Ndithe ayinamsebenzi kum ukuba akukho mntu uthetha njengam. Kutheni kufuneka ndinike iingcaciso?
2. Kwaye ndachaza ukuba kutheni ewe uyishiye. Ndithe ndidibene nabantu abaninzi abathandazayo kunye nokubekwa kweliso kanye imiba. Yintoni ehlaziyiweyo apha?
3. Ngaphambili inzululwazi yayingaziwa kwaye abantu babengazi imithetho yendalo. Ke ngoko kunokwenzeka ngakumbi kwaye ngokwendalo ukutenxa kubo. Namhlanje siyabazi. Ngokomzekelo, babedla ngokucinga ukuba kuyanetha ngenxa yemithetho. Namhlanje sazi kwangaphambili ukuba ingakanani imvula enayo kwaye nini, kwaye oko kuxhomekeke kwimithetho ye-meteorology kungekhona i-mitzvos.
4 Ndandingaqondi ukuba ndibhale phi ukuba uThixo unesizathu sokungabukeli. Ndabhala akajongi. Incasa? Mhlawumbi into yokuba sele singabantwana abakhulu kwaye akufanelekanga ukuba sinikwe isandla. Kodwa nokuba zithini na iithiyori, umbuzo oyinyaniso ngowokuba ngaba angawongamela ngokwenene? Ngokombono wam - hayi.
Kwaye kwakhona ndibhala ukuba siphelile.
Kodwa wagqiba (kwaye mhlawumbi wangcamla kunye naye) ukuba ayenze ngokwemigaqo.
Mhlawumbi into yokuba sele singabantwana abakhulu kwaye akufanelekanga ukuba sinikwe isandla.
Yiyo ke leyo impendulo ngaphandle kokumela elinye igazi ??abantwana abakhulu ???
Ukuba le yindlela esiye sakhathala ngayo kodwa awukrokri emehlweni am ngokukhutshwa komthetho ongenasiseko njengoko bendityholwa apha amaxesha amaninzi,
Capricorn uxolo. Uphinda kwakhona izinto esele zixoxiwe ukuya kutsho kumbindi.
Sele ndinicacisele ngokungabikho kokusa kwibango elithi "awuyi kuma" elibhekiswa ngokulinganayo kuwe.
Andiyithandi ngokwenene, kodwa kum sigqibile.
Molo uRabi uMichael,
Ubungangamsha bakhe buyakwazi ukufunda phakathi kwemigca
Ndaphendula ndathi, ndinomvuzo kunye nesohlwayo, indlela eqhutywa ngayo i-akhawunti andinalo ulwazi,
Kodwa ungangeneleli xa usopha kuba usifa, ??. ??
Ukuba uphelile ,,,, ngoko ubomi,
Ngaba uRabhi akakuboni ukubuya kwabantu bakwaSirayeli kwilizwe lakhe emva kweminyaka engamawaka amabini ekuthinjweni kwaye ngokukhawuleza emva kweminyaka emithathu emva kokuphela kokuBulawa Kwabantu Ngenkohlakalo njengento eyahlukileyo kwindalo? Ngaba oku akumele kubalelwe kulungiselelo lukaThixo?
Ukubuyela kwabantu bakwaSirayeli emhlabeni wabo ngenene sisiganeko esingaqhelekanga kumanqanaba embali, kodwa imbali iyinto entsonkothileyo kwaye akukho ndlela yokwazi ukuba kukho ukungenelela kukaThixo apha. Ngokubanzi ndicinga ukuba le nkqubo inokuqondwa kakuhle nangaphandle kwesidingo sokubandakanyeka kwayo. Abantu behlabathi bayayibona le nkqubo kwaye abazaphuli iinkolelo zabo zokungakholelwa kubukho bukaThixo-zenzululwazi.
Ngoko ke, ukwenza izigqibo ezivela "kummangaliso wembali" yinto eyingozi kakhulu kwaye ayiqinisekanga. Oku mhlawumbi kwahlukile kummangaliso wokwenyama.
Nangona kusenokuba namandla isibakala sokuba abaprofeti bakuxela kwangaphambili ukubuyela kwabantu emhlabeni wabo kwangaphambili, yaye ngale ngqiqo kusenokubakho indawo yokubona le nkqubo njengembonakaliso yokubandakanyeka kobuthixo. Andaz. Ndiyazi kuphela ukuba nokuba oku akuzange kwenzeke phantse akukho mntu wayenokunkqaya iBhayibhile yakhe (ubukhulu becala bebeya kufuna iindinyana ezifanelekileyo kwaye bazikhuphe ngokulula), ngoko ke kunzima kum ukuxela ubunzima bamanani obuphezulu kakhulu. kwezi ziprofeto. Ithisisi engalumeliyo uvavanyo lokuchasa nayo ayithandeki kakhulu xa isenzeka (emva koko, kwakukho iziprofeto ezingazange zibe yinyaniso kwaye akukho mntu wayezoyika). Ngaphezu koko, ezi ziprofeto zathatha inxaxheba kwinkqubo ngokwayo (enkosi sibuyele apha). Sisiprofeto esizizalisekisayo, ngokoqobo.
Kubonakala kum ukuba iKikro kufuneka ithi / ibhalwe ngesiHebhere. Kwakhona, isicatshulwa esisuka kwigama lakhe sinxulunyaniswa noPublius Trentius Ash.
Owu, khange ndicinge ukuba iya kupapashwa kwangoko kodwa iya kuthunyelwa kumhleli wesiza. Ungacima le nkcazo kunye nephambi kwayo.
Ngokwenene iza kum, kodwa ikhompyuter yam ayiphenduli. Ngoko ndaluvuma olo mpapasho yaye ngoku ndakwazi ukuthumela eyam impendulo. Ngu:
Kutheni ucima? Amagqabaza amabini ekufuneka bonke abafundi bethu bafunde kuwo. Eyokuqala andiqinisekanga. Igama ngesiLatin nguCicero, kwaye andisiboni isizathu sokuba ukubizwa kwegama kuguqulwe. Ukuba umntu eUnited States ubizwa ngokuba nguDavid, ngaba ndimbiza ngesiHebhere uDavid. Andicingi njalo.
Kwaye ndandingasiqondi kwaphela isizathu sokuguqulela isiLatin C kwinkawu yesiHebhere (njengoKesare endaweni kaKesare kwintlandlolo).
Ngokumalunga neyesibini, enkosi kakhulu. Kangangeminyaka bendicinga ukuba igoso. Ngoku uyintshatsheli kunye noRabhi onolwazi.
Ndathumela kwakhona impendulo yakho yesibini, kodwa nje ukuba nexesha elisengqiqweni. Ukuba ubona ukuba owokuqala weza ngqo kwindawo (ngoko wacinga), ngoko kufuneka uqonde ukuba eyesibini iyafana. Njengoko kukhankanyiwe, ndiwavumile omabini ukuba alayishwe (le yindlela isoftware eyakhiwe ngayo yonke into eza kum). Ndivuma yonke into, ngaphandle kwezinto ezingafanelekanga (okwangoku i-BH yayingekho).
Sobabini koosolusapho (P. Property Torah, c):
Nabani na othe wafunda kuso isahluko esinye okanye ivesi enye okanye incwadi enye, nokuba yincwadi enye, makamhlonele, kuba samwisela umthetho uDavide ukumkani wakwaSirayeli, owayengafundanga kuAhitofele, kodwa wafunda izinto ezimbini, owafunda umfundisi wakhe omkhulu waza wazi. ukuba kwathiwa Kwaye ulwazi kwaye kungekhona izinto ezilula kunye nezinto eziphathekayo kunye noDavid Meleki Yisrael ongazange afunde ku-Ahitofele kodwa zimbini kuphela izinto ezifundwayo uRabbi Alufu kunye nomhlobo wakhe ofunda kumbhali wakhe isahluko esinye okanye enye ihalakha okanye ivesi enye okanye enye inyosi ileta enye ingakanani na imbeko efanele iphathwe IMizekeliso XNUMX:XNUMX + Imbeko izilumko ziya kudla ilifa + uShem / IMizekeliso / XNUMX Y + kwaye abantu abamsulwa baya kudla ilifa okulungileyo yaye akukho nto ilungileyo ngaphandle kweTora + ekuthiwa + nguShem / IMizekeliso / XNUMXb
Kwaye nakwiBM Lag AA:
Vumela uRabhanan: URabhi owathi - Rabi owafunda ubulumko, kungekhona uRabi owafunda iBhayibhile kunye neMishnah, amazwi kaRabi Meir. URabbi Yehuda uthi: Konke oko ubuninzi bobulumko bakhe bulungile. URabbi uYossi uthi: Akazange awakhanyisele kwanamehlo akhe ngaphandle kwe<em>mishnah enye – lo ngurabhi wakhe. URaba uthe: Njengo rabi wempahla, uDasburn Zohma Listron.
Yaye ukuba kufanelekile ngomfundi ukuba awacime amazwi enkosi yakhe, intshatsheli yakhe naleyo ayiqhelileyo?
Enkosi kakhulu ngezincomo ezibaxiweyo noko :). Mhlawumbi apha ndiza kuthathela isifundo ukuba ndibulele urabhi ngenani leekhawuntari. Ndibulela kakhulu ngeentetho zenu kunye nopapasho olundivulele umnyango kwiindawo ezininzi, lwaza lwatyebisa ulwazi lwam kwezinye iindawo ezininzi.Ndiza kuyibiza ngokuba "bubungqina obuvela kwitshokolethi." 🙂), ndandise imbono yam, kwaye ngamanye amaxesha udale iholide yomphefumlo wam.
Kwaye ngokuchanekileyo ngenxa yoku, andizange ndifune "ukufundisa uHalacha" kumfundisi. Kwaye ndacebisa ukucima, ekubeni ndicinga ukuba kuya kwanela ukulungisa umzimba wenqaku ukuba urabhi uwufumanisa ufanelekile, kwaye ayinamsebenzi inkangeleko yempendulo ngokwayo. Kwakhona, njengoko kukhankanyiwe, ndaziva ndingakhululekanga ngokukhomba ngebhrashi ye-wavy ngempazamo, ukuba ngokwenene yimpazamo.
Ngokwenyani, ngokolwazi lwam olungcono, ukubizwa kwesiLatini ngokwenyani yi-cicero (ngesiNgesi sangoku, mhlawumbi iingcingane ziye zayigqwetha). Umbuzo ovela kuDavide unika ingxaki xa kufikwa kwigama elaziwa ngokuba lisuka kodwa lisetyenziswe ngokwahlukileyo ziinkcubeko ezahlukeneyo, kwaye ikwaphakamisa ingxaki ekusetyenzisweni kwegama njengolandelelwano lwelungu okanye njengegama elisebenzisa igama elithi into nakwintsingiselo yayo. Kodwa kubonakala kum ukuba igama lesidlaliso elithi Chitsro, ukuba ngokwenene liyavunywa kwaSirayeli, alinamandla, kwaye alithwali intlawulo yenkcubeko ukuba ukusetyenziswa kwe-cicero kuya kuba yinto engaqondakaliyo kubantu okanye iya kubahlutha intsingiselo yegama. . Kwakhona kubonakala kum ukuba ekukhanyeni kwemithetho ebhaliweyo eyamkelweyo namhlanje ukusetyenziswa kwefom ye-Tsizro kuncitshisiwe.
Ngokuphathelele ukuzonwabisa okunengqiqo, njengalowo sele kukhankanyiwe ngasentla kufuneka abe nombulelo ngenxalenye enkulu yolwazi lwam kwicandelo lokuqiqa, ndiyathemba ukuba ndifunde ngokwaneleyo ukuze ndingaphumeleli kwinto encinane. Ndiye ndacinga ukuba impendulo yam yesibini iya kupapashwa ngokuzenzekelayo, kodwa bendingayazi enye indlela yokubonisa umnqweno wam wokuba owokuqala acinywe, ngaphandle kwempendulo yakhe, apho ndithe andikholelwa ukuba le ndlela yenzelwe upapasho olukhawulezileyo. Ndicinge ukuba ekugqibeleni umntu omthembileyo uza kubabona, kunye nesicelo sokucinywa esikhankanywe mva nje.
Kwaye kwakhona enkosi kakhulu.
Kulisiko likabawo ongasekhoyo (owayefunda isiLatini) ukuba indlela yokulibiza ekuqaleni yayisithi Tszero (noKesare). Apha, kwakhona, yintshatsheli noRabhi onolwazi. 🙂
Ngomhla wama-21 weShivat 02 - 2017/14/43 ngo-XNUMX:XNUMX
Ubanga ukuba nokuba ungafumana inkcazo yexabiso elibanzi kwiseti yemithetho, awubophelwanga yiyo.
Nam, ndinayo (ukusa kwinqanaba elithile ndisayibambe) le mbono, kwaye ke ngoko andiziva ndibophelelekile kwi-echoes ye-ethnocentrism okanye i-chauvinism evela kubuYuda (ngaphezu koko, ndandi - kwaye kwinqanaba elithile ndisekhona) ndisebenzisa i-minimalism yokutolika kwaye ndibanga ukuba kukho Asiyo "inkcazo yexabiso" kwi-halakhah.
Kodwa mva nje ndiye ndathamba kwaye ndithanda ukuqonda iingxelo ezithile zexabiso ezinokuthi zibekhona kwithiyori (ukwaliwa kwemboleko-mali yenzala, ulangazelelo lobukumkani, ukusekwa kweTempile, umnqweno wako konke ukuthotyelwa kobuYuda emhlabeni), kungoko ukwaziwa kwam kwatsala ingqalelo yam. Kwinyaniso yokuba Cinga uThixo ufuna wenze into, nangona engayiyalelanga ngokucacileyo, kutheni ungayenzi (oko kukuthi, zimbini izinto ezitshintshileyo - 1. Ndaqaphela ukuba ingxelo yexabiso egqithisileyo yavela 2. Ndandeyiseka ukuba iingxelo ezivela kwiShittin ziyabophelela).
Ukuba umbuzo ubungowam kuphela, ndiye ndaziva ndingeva, kodwa oorabhi bethu sele bemisele ukuba intando kaThixo ibophelela ngokwahlukileyo kwiTorah - uxanduva lokumamela amazwi ezilumko njengoko aziwa Yena ”(xa ekugqibeleni IHasbra luqikelelo lokucacisa intando kaThixo).
Oko kukuthi, emva kokuba ndivume ukuba ukuthanda kukaThixo yinto ebophelelayo, ndaxoxwa ukuba ingqondo yezilumko - ubuncinane kwisiyalo 'sokuziphatha' (kungekhona kwingqiqo yokuziphatha, kodwa njengeentlanganiso zokuziphatha) Into ebophelelayo kuba kanye njengoko beyingcaphephe ekuqondeni uHalacha nokuma ukuthanda kukaThixo.Embindini wayo, kusenokwenzeka ukuba baziingcali ekuqondeni into okuyiyo ukuthanda kukaThixo (oku kungakumbi kwiincwadi zokungcamla kweMitzvos kumaRishoni kunemibhalo engcwele. UTannaim noAmoraim, ekubonakala ukuba abazange bazame ukuphembelela imfundiso ethile kodwa bakwafumana amazwi anjalo nanjalo anexabiso).
Ke ngoku umphefumlo wam kumbuzo wam - ngaba unaso isizathu sokuyeka ukuzalisekisa intando kaThixo njengoko ityhilwe emehlweni akho ekuyigcineni iTorah?
kwiinyanga 4 ezidlulileyo
Ukuba ndingafumana ingxelo yexabiso kwiTorah ngokuqinisekileyo ilindelwe kum. Oku kuyintando kaThixo nokuba ayisiyiyo ngokwenene iHalacha.
Kodwa ingxelo yexabiso evela kwisilumko ayibopheleli. Ngokombono wam, izilumko azizona iingcali (kungekhona njengoko ubhalile). Igunya lezilumko alisuki kwinto yokuba zichanile, kodwa kwinto yokuba silifumene igunya lazo (bona Kum. Kukho izizathu ezilungileyo kakhulu zoku, kodwa kungekhona ngenxa yokuba ziingcali. Kwaye ngoku uya kuqonda ukuba sifumene igunya labo kwimiba ye-halakhic kodwa kungekhona kwi-meta-halakhic okanye kwimiba yexabiso. Kuphela ukuba baye bagqiba ekubeni bayifake kwi-halakhah (efana nokunyanzeliswa kwinqanaba le-sodomy kunye nokunye okunjalo) kuyasibophezela. Kakade ke, ukuba siyavumelana nabo, siya kwenjenjalo, kodwa ukuba akunjalo, akuyomfuneko ukwenjenjalo. Ngokuchasene noko, kuyimfuneko ukwenza ngokuchaseneyo ngokuchanekileyo kuba i-Hasbra inesimo esibophezelayo.
Ke ukuthanda kukaThixo akufuneki nganto iintloko zomkhosi owaseka into ethile, koko zisuka kwelaseGemare, nakuzo zonke iindawo zamandulo; Nangona kukho iimpazamo ezahlukeneyo kule nto, kwaye ubone amanqaku apha kwindawo ukuze ufumane ingcaciso: http://www.mikyab.com/single-post/2016/06/21/%D7%A2%D7%9C-%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%9F-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99
BSD XNUMX eSivan A.T.
Kwiingxoxo phakathi koorabhi ngombandela wokumisela usuku lokukhumbula iHolocaust - bona amanqaku kaRabbi Shmuel Katz, 'Intshabalalo neSikhumbuzo' kunye 'nosuku lokuQala lokuBulawa Kwabantu Ngenkohlakalo', kunye nenqaku likaRabbi Yeshayahu Steinberger, Inxeba Ngaphambi kokuPhiliswa. Bobathathu kwiwebhusayithi 'i-Shabbat Supplement-Makor Rishon', kunye neempendulo zam kula manqaku angasentla.
Ndiza kuxolisa kwangaphambili ndifunda umxholo kule ndawo okokuqala kwaye andazi ukuba imibuzo yam okanye iimpendulo zayo zivele kumanqaku okanye kwimibuzo yabaphenduli apha.
Ukuba ucinga ukuba uThixo uyekile ukungenelela kwizinto ezenzekayo kwihlabathi lethu, unokuchaza ngokwemigaqo esisiseko iimbono zobuYuda ezifana nezi:
A. ukubeka iliso.
B. Umvuzo kunye nesohlwayo - Kubonakala kum ukuba uMaimonides (ndibhala ngenkumbulo kungekhona ngokuphononongwa kwincwadi) ubanga ukuba ikhondo lendalo yehlabathi liqhutywa ngenxa yokuziphatha kwangasese kwamaYuda njengaye kwaye ndanikela imvula ngexesha, njl.
2. Ucinga ukuba ukuthandaza ka-3 ngosuku kuye kwaba yimfuneko ngenxa yokuba kungekho mntu uthetha naye? Ngaba yonke into eseleyo yintlawulo ye-halakhic ekhutshwe mhlawumbi esona sizathu siphambili sokucela iimfuno zakho kumntu onokubanika?
Ngaba kunokwenzeka ukuyiyeka iRosh Hashanah apho wonke umntu ehlabathini edlula phambi kwakhe njengoonyana bakaMeron?
4. Imbeko yakhe icinga kwaye andizimiselanga kufanisa uKhu ngokubanga abo babecinga ukuba uShiva uye walala? Okanye walishiya ihlabathi lakhe?
Ukuba izinto sele zixoxiwe malunga nesiza ndingakuvuyela ukuhlalisa ireferensi kwiindawo ezifanelekileyo ukuba ixesha lakho alikuvumeli ukuba uphawule.
24 Kislev 12 - 2019/17/22 ngo XNUMX:XNUMX
Ubuza imibuzo emininzi ebanzi kwaye kunzima ukuyiphendula apha. Unokufumana zonke iimfundiso zam kwezi kunye nezinye izihloko kwi-trilogy entsha, kwaye kwezi zihloko kwincwadi yesibini (akukho mntu ungumbusi emoyeni). Ngaphaya koko unokukhangela indawo apha kwaye ufumane iireferensi ezininzi kumbuzo ngamnye wale mibuzo.
I-1) Ngokumalunga nokungafaniyo ekulawuleni kuka-Maimonides kunye nokunye okunjalo, akunanto yakwenza ne-meta-halakhah, kodwa inkcazo ye-halakhah yenziwa ngendlela ethile kodwa umgaqo wayo awuhambelani ngokuyimfuneko (mhlawumbi inokuba nayo. uthe ayizalani ngokuyimfuneko).
Umzekelo: " U-AR Acha Bar Hanina uyabonakala kwaye uyaziwa phambi kwalowo wathi kwaye wayeyihlabathi ukuba akukho mntu kwisizukulwana sikaRabbi Meir njengaye kwaye kutheni engazange amise i-halakhah njengaye ukuba abahlobo bakhe babengenakuma ekupheleni. ngoluvo lwakhe ukuba uthi malunga msulwa engcolileyo kwaye umbonisa ubuso obunyulu Siyabona ukuba nangona izilumko zazi ukuba urabi osisilumko (kwaye mhlawumbi ekunene kubo) akazange alawule kwi halakhah njengaye.
Kwakhona kwiphepha elifanayo ( Eruvin XNUMX :) isizathu kukuba i-Halacha Kavah inikwe nangona i-Shabash ilolwa yiTapi kwaye kungenxa yokuthobeka kwabo kwaye akubonakali kum ukuba umntu ucinga ukuba ukuthobeka kusoloko kukhokelela kwinyaniso. inyaniso (nangona amaxesha amaninzi Izinto ziba bukhali kwaye zicace ngakumbi).
Ngokombono wam, kucace gca ukuba abacinga (ngokungafaniyo nabalamli ...) be-halakhah bahambe ngendlela ecacileyo nengaguqukiyo, emva koko, sifumene uninzi lwabo olwaluqhele ukungalawuleki njengabo kwaye kuphela kwiimeko ezimbalwa baye balawula. njengabo. Ngamanye amazwi, akukho ntsingiselo kwingxelo yokuba uMaimonides akanayo i-meta-halakhic consistency kuba kukho intsingiselo kwisigwebo se-meta-halakhic.
2) URabhi wagqiba ngesizathu esithile ukuba ummangaliso kukuba akanako ukubakho ngaphandle kokungenelela. Uyifumana phi le ngcaciso?
Umnqa woluvo olunjalo kukuba kuye nabani na owakhe wayibamba iBhayibhile ngesandla kucacile ukuba phezu kwayo nje yonke imimangaliso eyayilapho benza isono sokucamagushela nokuvukela (ngokutsho kukaRabhi ngelo xesha kwakusenzeka imimangaliso) yaye ukuba sithi imimangaliso zizinto ezingenakwenzeka ke sathi zonke ezo zizukulwana zaziliqela lezidenge (uDon Ku kwaye yintoni namhlanje amashumi amawaka aguqukayo ngenxa "yemimangaliso" kaBaba kunye nama-charlatans nangaphezulu kunabo bangamakholwa angoniyo. uloyiko lwezohlwayo abangazange babone kubo Ku unyana ka Ku nyana owayengengomoni ngelo xesha)
Ndicinga ukuba ummangaliso lithuba eliphantsi lezibalo ezenzekayo kwaye ngoko kukho ukuvulwa kwabakhanyelayo (kwanangexesha labaprofeti) ukuba bathi oku kungokwemvelo kwaye akukho mmangaliso. Ngokukwanjalo ke nakwesi sizukulwana sethu sinemiqondiso. (Ndiyayazi ingxaki yeli bango, kuba kuye kwavela ukuba ngokuhambela phambili kwenzululwazi, izinto ezazikhe zathathwa njengenkomfa ngenxa yokuthathwa njengobuthathaka namhlanje siya kuzazi ukuba zazizinikele. Kodwa ziseninzi izinto – xa abantu babuyela kwilizwe labo
3) Urabhi wabhala “Kodwa andicingi ukuba baye bangena kubunzulu bentsingiselo yayo. Injongo karabhi yayikukutsho ukuba ungowaseZiyon, kanye njengoBen-Gurion.
Siyabulela kuRabhi ngokubeka uburharha kunye nomdlalo ohlekisayo kumazwi akhe. Kuyathambisa ukufunda….
(Andikholelwa ukuba uyakholelwa kule nto).
Ndolule kuyo yonke into oyibhalileyo apha kwiindawo ezahlukeneyo.
1. Andisayikhumbuli ukuba wayethetha ngantoni (what a non-uniformity). Kodwa malunga nesigwebo se-Knesset, ndakhe ndacaphula njengobungqina bokuba i-halakhah ayisoloko iyinyani kodwa inexabiso lokuzimela (ukulawula njengoko ndiqonda nokuba ngokombono wam ayisiyonyani le). Ngokubhekiselele kwi-BS kunye ne-BH, abahlalutyi bohlukene ngoku. U-R.I. Karo kwimithetho yeGemara uchaza ukuba ukuthobeka kwabo kubakhokelela enyanisweni (kuba baqala baqwalasela amazwi e-B'Sh ngaphambi kokuba baqulunqe isikhundla sabo) ndiye ndandisa oku kuTuba kwiindinyana ezimbalwa.
2. Kule ndandise iTuba kwincwadi yesibini kwi-trilogy (kwaye kwakhona apha kwisayithi kwiindawo ezininzi). Akukho silwanyana sinjengommangaliso ngaphakathi kwendalo. Nabani na othetha loo nto ubhidekile nje.
3. Andikholelwa nje kuphela kodwa ndiqiniseke ngokupheleleyo. Urabhi wasePonivez wayengumSiyoni ongqongqo gqitha.